အပြာစာပေနှင့်လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသမီးများနှင့်ပါတနာနှင့်ပါတ်သက်သောအတွေ့အကြုံများ (၂၀၁၉၉) - သင့် ဦး နှောက်တွင်အပေါက်
J ကိုအမျိုးသမီးကနျြးမာရေး (Larchmt) ။ 2019 ဧပြီ 18 ။ Doi: 10.1089 / jwh.2018.7006 ။
ဂျွန်ဆင်ဂျေအေ1, Ezzell ကို MB2, တံတားများ AJ3, Sun က CF4.
နောက်ခံသမိုင်း: လိင်အပျော်အပါးနှင့်ကျူးကျော်မှု၏မညီညွတ်သောရုပ်ပုံများဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာပြထားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေမီဒီယာသည်ငယ်ရွယ်သောလိင်ကွဲလိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာဇာတ်ညွှန်းများကိုတိုး။ ဖော်ထုတ်လျက်ရှိသည်။ သို့သျောလညျး၏မြစ်အောက်ပိုင်းအခန်းကဏ္ on အပေါ်ပြုအလုပ်အနည်းငယ်သာရှိခဲ့သည် ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း စားသုံးမှု; ဘယ်လိုမျိုး ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကလိင်တူဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများ၏အတွေးများနှင့်ခံစားချက်များနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသလား။
ကုန်ကြမ်းနှင့်နည်းစနစ်များ: ကျနော်တို့၏စားသုံးမှုပေါင်းသင်းခြင်း, United States မှာ 706 လိင်ကွဲအမျိုးသမီးတွေ (အသက်၏ 18-29 နှစ်) စစ်တမ်းကောက်ယူ ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေး, အတွေ့အကြုံများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်အတူ။
ရလဒ်များ: အများဆုံးလိင်ကွဲအမျိုးသမီးတွေကိုယ်တိုင်မြင်ကြပြီဖြစ်သော်လည်း ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း ထက်ဝက်ထက်အနည်းငယ်လျော့နည်း (83%), (43.5%) တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေများအတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်အဘယ်သူကို၏ထက်ဝက်လသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းနှုန်းတစ်ကြိမ်ပြုလုပ်အသုံးပြုပါ။ လိင်တက်ကြွခဲ့ကြသောသူအမျိုးသမီးစားသုံးသူများထဲတွင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့စားသုံးမှုမြင့်မားမှုနှုန်းအပေါ်မှီခိုကြီးထွားတစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်စဉ်အတွင်းညစ်ညမ်းပုံရိပ်များ၏လိင်-ကြီးထွားပြန်လည်သိမ်းဆည်းနေစဉ်ညစ်ညမ်း script ၏တိုးချဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ activation နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း arousal ရရှိနှင့်ထိန်းသိမ်းခြင်းအဘို့နှင့်တစ် preference ကို ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း တစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ကျော်စားသုံးမှု။ ထို့အပွငျ, ပိုမိုမြင့်မားသောလိင်စဉ်အတွင်းညစ်ညမ်း script ၏ activation ထက်ရိုးရှင်းစွာညစ်ညမ်းပစ္စည်းကြည့်ရှုကိုလည်းသူတို့ရဲ့အသွင်အပြင်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောမိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်စဉ်အတွင်းနမ်းသို့မဟုတ် caressing အဖြစ်ရင်းနှီးပြုမူသောအမှုလျော့နည်းသွားခံစားအကြောင်းကိုမလုံခြုံမှုများပိုမိုမြင့်မားမှုနှုန်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
နိဂုံး: ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ကြောင်းအကြံပြု ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း စားသုံးမှုသည်အမျိုးသမီးစားသုံးသူများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်သွယ်ဝိုက်။ သက်ဆိုင်သည်။ လိင်စိတ်ဆန့်ကျင်သောလိင်ဆက်ဆံမှုများ၌ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသမီးများ၏လိင်မှုဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများသည်မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုတိုးတက်စေနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
KEYWORDS: သိမြင် script ကိုသီအိုရီ; အမျိုးသမီးလိင်; ဝတ်လစ်စလစ်ရုပ်ရေးခြွယ်ခြင်း; ဆက်ဆံရေး; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး
အဆိုပါတိုးမြှင့်အမည်မဖော်, အသုံးပြုနိုင်စွမ်း, နှင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်း၏တတ်နိုင်သည့်ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script ကိုကောလိပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုခင်းတစ်ခုနေရာအနှံ့စိတျအပိုငျးစေပြီ။1 အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကောလိပ်ကျောင်းသားများကိုများထဲတွင် 82.3 ယောက်ျား၏% နှင့်အမျိုးသမီး၏ 60.4% အစဉ်အဆက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။2 (အသက်၏ 18 နှင့် 30 နှစ်ပေါင်းကြား) အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိကောလိပ်အသက်အရွယ်နှင့်လူငယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးတွေအဟောင်းတွေမိန်းမတို့အားနှိုင်းယှဉ်ညစ်ညမ်းသုံးစွဲဖို့နှစ်ကြိမ်အဖြစ်များပါတယ်။3 အရွယ်ရောက်ပြီးသောအမျိုးသမီးများအနေဖြင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ကြီးသောရွယ်တူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကအမျိုးသမီးများသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုနှုန်းသည်အမျိုးသားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အနည်းငယ်နိမ့်ကျသည်။ ကောလိပ်အရွယ်အမျိုးသမီးများ၏ ၁၃.၄ ရာခိုင်နှုန်းကသာလျှင်ကောလိပ်အရွယ်အမျိုးသားများ၏ ၃၅.၃% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပြီးယခင်လကညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများကြည့်ခြင်းအားအစီရင်ခံခဲ့သည်။2
စီးပွားဖြစ်ညစ်ညမ်းတွင်ဖော်ပြပါရှိသည်အမျိုးသမီးတွေဆီသို့ကျူးကျော်များ၏မြင့်မားပေးထား4 နှင့်အမျိုးသမီးများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်နွယ်သောသုခချမ်းသာတွင်လိင်စိတ်ကျေနပ်မှုသည်5 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစူးစမ်းရှာဖွေခြင်းနှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၏အခန်းကဏ္ increasing တိုးပွားလာခြင်းကအမျိုးသမီးငယ်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးများနှင့် ပတ်သက်၍ အရေးကြီးသောမေးခွန်းများပေါ်ပေါက်စေသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွင်ဖော်ပြထားသောအကြမ်းဖက်မှုများကိုအမျိုးသားများကအမျိုးသမီးများအပေါ်ကျူးလွန်သောကြောင့်ဤမေးခွန်းများသည်လိင်ကွဲမိန်းမများနှင့်အထူးသဖြင့်သက်ဆိုင်သည်။6,7
အပြာစာပေရုပ်ပုံကြည့်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများ၏လိင်ကျန်းမာရေးနှင့်လိင်အပြုအမူတို့အကြားဆက်နွယ်မှုရလဒ်များအပေါ်အဓိကထားအာရုံစိုက်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုလေ့လာခြင်းသည်အစောပိုင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ပိုမိုလျင်မြန်စွာလိင်မှုကိစ္စစတင်ခြင်း၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလိင်အပေါ်ပိုမိုခွင့်ပြုထားသည့်သဘောထားများနှင့်စအို၊ လိင်၊ မိတ်ဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ လိင်ဆက်ဆံစဉ်။8-10 အဆိုပါထိတွေ့အဆိုပါအစောပိုင်းက, ပိုအန္တရာယ်ခြိမ်း။11 အများအပြားက Meta-analysis သည်စီမံကိန်းများ, ထိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုပိုမိုအန္တရာယ်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာချေမှုန်းရေးနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ညွှန်ပြ12-14 အဖြစ်အဟောင်းများကိုကြည့်ရှုကြားတွင်လိင်ကွဲဆက်ဆံရေးဆီသို့ပိုပြီးရိုးရာကျားသဘောထားတွေမှတိုးမြှင့်လိုက်နာမှုနှင့်အတူ။15
အမျိုးသမီးများ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အခန်းကဏ္onကိုအာရုံစိုက်သောအခြားသုတေသနပြုချက်များသည်ကွဲလွဲမှုများရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ အချို့အမျိုးသမီးဖြေကြားသူများကအပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်းအားအပြုသဘောဆောင်သောလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။16,17 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်မြောက်မှုကို, လုပ်ပိုင်ခွင့်များနှင့်အရည်အချင်းကိုတစ်အသိတိုးပွားလာခြင်းနှင့်ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့လျော့ကျလာ။18-21 ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအခြားအမျိုးသမီးသို့သော်အစီရင်ခံစာအရှက်သို့မဟုတ်အဆင်မပြေ,22 အနုတ်လက္ခဏာ Self-Appraiser ညစ်ညမ်းအတွက်မိန်းမတို့အားသူတို့ကိုယ်သူတို့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ,23,24 အဖြစ်တျမှုနညျးနဲ့အနိမ့် Self-လေးစားမှု၏ခံစားချက်များကို။25 တခြားလေ့လာမှုညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုနှင့်ခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုများအကြားအဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေးကိုပြသ။26
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကြားဆက်ဆံရေးကျေနပ်မှုအတွက်ညစ်ညမ်း၏အခန်းကဏ္ဍကိုအပေါ်သုတေသနပြုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုလား၏ခံစားချက်များကိုတစ်ဦးကျဆင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ကြည့်ရှုညစ်ညမ်းပြသထားတယ်,22,27,28 အနိမ့်ဆက်ဆံရေးမျိုးအရည်အသွေးကို25 နှင့်ယုံကြည်မှုလျော့, နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲတိုးတက်လာခဲ့သည်။29 လိင်ကွဲဆက်ဆံရေးအတွက်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးအကြားကိုလောင်နေသည်ဘယ်လောက်ညစ်ညမ်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌တစ်ဦးသာရှိပြီးကိုလိင်ကွဲပြားမှုဆိုင်ရာ "ညစ်ညမ်းကွာဟမှု" သည်ရှိ၏, "သူတို့အနည်းငယ်သို့မဟုတ်လုံးဝမအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့စဉ်မှန်မှန်ညစ်ညမ်းကိုအသုံးပြုဖို့သူအမျိုးသားများနှင့်အတူပူးပေါင်းလျှက်များစွာသောမိန်းမတစ်ဦးတသမတ်တည်းပုံစံရှိ၏။ "30(p153) ဤ "ညစ်ညမ်းကွာဟမှု" ကိုတိုက်ရိုက်အောက်ပိုင်း relational စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်တည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဆက်ဆံရေးအတွက်နှစ်ဦးစလုံးမိတ်ဖက်များအတွက်အဖြစ် သာ. ကြီးမြတ်အထီးကျူးကျော်ခြင်းနှင့်နိမ့်အမျိုးသမီးလိုလားနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။31 မကြာသေးမီကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုများနှင့်အတွေ့အကြုံမရှိသောသုတေသနနှစ်ခုစလုံးကို meta-analysis သည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုနှင့်ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးတို့အကြားအပျက်သဘောဆောင်သောဆက်နွယ်မှုကိုအတည်ပြုသည်။32
ကျွန်ုပ်တို့၏သုတေသနသည်အမျိုးသမီးများ၏လိင်ဆက်ဆံမှု၌ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အခန်းကဏ္aကိုအနည်းငယ်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းဖြင့်ချဉ်းကပ်သည်။ လိင်ဇာတ်ညွှန်းသီအိုရီ၊ အထူးသဖြင့် Wright's အပေါ်အခြေခံသည်33 ဝယ်ယူ, activation, လျှောက်လွှာ (3AM) မော်ဒယ်လ်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လိင်အရဆက်ဆံမှုကာလအတွင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏သိမြင်နားလည်မှုအခန်းကဏ္exploreကိုစူးစမ်းလေ့လာသည်။ အကယ်၍ ရှိလျှင်၊ အဖော်အဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်အမျိုးသမီးများ၏အတွေးများနှင့်ခံစားချက်များတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်မည်သည့်အခန်းကဏ္ play မှပါဝင်ပါသနည်း။ Wright ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဇာတ်ညွှန်း 3လိင်မှုဆိုင်ရာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၏ AM ပုံစံသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များကလူတစ် ဦး ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ် heuristic နားလည်မှုကိုယခုအချိန်တွင်မည်သို့ဖြစ်သင့်သည်၊ မဖြစ်သင့်သည်ကိုတိတိကျကျဖော်ပြရန်ရည်ရွယ်သည်။ အထူးသဖြင့်လိင်တူချင်းချစ်သောလိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသမီးများ၏ခံစားချက်များနှင့်ခံစားချက်များနှင့်သက်ဆိုင်သလား၊ မကြာခဏညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်အမျိုးသမီးများသည်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစိတ်ထဲ၌တက်ကြွစေမည့်ဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိပါသလား။ အဖော်အဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဇာတ်ညွှန်းသည်အမျိုးသမီးများသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုနှင့်သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ခံစားရသနည်း။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များနှင့် 3လေးမော်ဒယ်
ညစ်ညမ်း၏သိနားလည်နိုင်စွမ်းအခန်းကဏ္ဍအပေါ်အာရုံစူးစိုက်ထိုကဲ့သို့သောမီဒီယာ၌တွေ့သောသူတို့သည်အဖြစ်ယဉ်ကျေးမှု script များကလူသို့မဟုတ်မသင့်, ထင်ခံစားမိနှင့်အဘယျတုန့်ပြန်ပြုမူသင့်တယ်ဘယ်လိုအချက်တွေအရင်တစ် heuristic မော်ဒယ်ပေးနိုငျကွောငျးကိုစောဒကတက်ရာ "သိမြင်မှု script များ" သီအိုရီအတွက်အမြစ်တွယ်နေသည် သူတို့ကိုလှည့်ပတ်ဖြစ်ပျက်။34 Heuristic အပြောင်းအလဲနဲ့စဉ်းစား, တကယ်တော့၏အလေးချိန်နှင့်သတိခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာအကြောင်းအရာ system process, ဆန့်ကျင်အဖြစ်မြန်ဆန်အများကြီးစဉ်းစားခြင်းမရှိဘဲပြုမိကြောင်းကိုအချက်အလက်များ၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြောင်းအလဲနဲ့ဖော်ပြသည်။ တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဇာတ်ညွှန်း၏အယူအဆ, စိတျအပိုငျးအတွက်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအခြေအနေတွေလိင်အဖြစ်ရေတွက်သောအရာကိုသတ်မှတ်ကူညီပေးသောအတွက်နည်းလမ်းများအပေါ်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံစဉ်အတွင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများနှင့်ဖွဲ့စည်းပုံမျှော်လင့်ချက်များ, အလိုဆန္ဒများကို၎င်း, အပြုအမူတွေကိုခွဲခြားသတ်မှတ်အလေးပေး။35,36 Wright ရဲ့33 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script ကို 3လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေး၏ AM မော်ဒယ်အခြားအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့ထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script ၏အယူအဆအပေါ်တည်ဆောက်,34 မီဒီယာ,37 နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေး38 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေ, ခံစားခကျြမြားနှငျ့အမူအကျင့်တစ်ခုအခန်းကဏ္ဍအံ့သောငှါရောက်လာသောမှတဆင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များ operationalize မှသီအိုရီ။ Wright သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများတွင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်မတိုင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များစိတ်ထဲမှာဝယ်ယူခြင်းနှင့် activated ရမညျဟုစောဒကတက်သည်။ ဤအခြေလှမ်းများ-ဝယ်ယူတစ်ခုချင်းစီ, activation နှင့်လျှောက်လွှာ-စေခြင်းငှါ, လူမှုရေး, ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်အခွအေနေ variable တွေကိုအားဖြင့်အဖြစ်မီဒီယာများ၏ဆက်စပ်မှု, ပျံ့နှံ့နှင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကကမကထပြုခဲ့သို့မဟုတ်တည်းဖြတ်ရလိမ့်မည်။ အကျိုးဆောင်များနှင့်မော်ဒပါဝင်သည်, ဒါပေမယ့်, လူမျိုး, ကျား, မ, အသက်, အသုံးပြုဖို့တွန်းအား, အကြိမ်ရေများနှင့်ထိတွေ့မှု၏ကြာချိန်ကန့်သတ်ကြသည်မဟုတ်, ဇာတ်ညွှန်း-အခွအေနေစာပေးစာယူနှင့်ကျောင်းများ, မိသားစုများ, ဒါမှမဟုတ်ဘာသာရေးအလေ့အကျင့်အားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးတန်ပြန်ဇာတ်လမ်းများ၏ရရှိမှု။ လူမှုရေးလုပ်ငန်းစဉ်၏အသီးအသီးအဆင့်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script ကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်သို့မဟုတ်အလယ်အလတ်အချက်များပေါ်တွင် မူတည်. salience အတွက်လျော့ကျသွားသည်။ ဥပမာအထူးသဖြင့်အလွန်အမင်းပုံရိပ်တွေကိုလှုံ့ဆော်ဖို့မီဒီယာများ၏ပိုမိုမကြာခဏကြည့်ရှု, အချိန်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူကြာကြာကာလအရှင်ညစ်ညမ်းဇာတ်ညွှန်းအပြုအမူကိုသြဇာလွှမ်းမိုးလိမ့်မည်အခန်းကဏ္ဍကိုတိုးမြှင့်, ကြည့်ရှု၏အထူးသဖြင့်အမျိုးအစားများ၏စိတ်ထဲတွင်အတွက်ပိုမိုမြင့်မား activation ရှိလိမ့်မည်။
၏အစိတ်အပိုင်းများကိုလျှောက်ထားသုတေသန 3ညစ်ညမ်းမှလေးမော်ဒယ်ညစ်ညမ်းတိကျတဲ့သဘောထားနှင့်အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်သောလမ်းအဖြစ် variable တွေကိုဖြန်ဖြေသို့မဟုတ်စိစစ်ဖော်ပြသည်။ သဘောထားတွေ၏စည်းကမ်းချက်များ၌, longitudinal data တွေကိုညစ်ညမ်းစားသုံးမှုဆယ်ကျော်သက်လိင်အပေါ်အမြင်များပြောင်းလဲသဖြင့်ဆယ်ကျော်သက်များအတွက်မွေးဖွားထိန်းချုပ်မှု access များအတွက်ပိုမိုထောက်ခံမှုနှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ကိုပြသ39 အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအကြောင်းကိုပိုမိုလစ်ဘရယ်ယုံကြည်ချက်လှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့်ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချ access ကိုအထောက်အပံ့တစ်ခုတိုး။40 ညစ်ညမ်းကြည့်ငယ်ရွယ်သောကြည့်ရှုဟောင်းများကိုကြည့်ရှုအကြားတွင်ပိုပြီးရိုးရာကျားသဘောထားတွေကိုတိုးမြှင့်, ဒါပေမယ့်မတွေ့ရှိရထားပြီး,15 နှင့်အပြုသဘောမသက်ဆိုင် extramarital ရေးရာဆီသို့ကြိုတင်သဘောထားတွေ၏ extramarital လိင်ဆီသို့ပိုပြီးအလိုလိုသဘောထားများနှင့်အတူပတျသကျရန်။41
အပြုအမူတွေကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌, သုတေသနလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေဆီသို့ပိုပြီးအလိုလိုသဘောထားတွေကိုတက် hooking မြင့်မားဖြစ်ပွားမှု, ထူးခြားတဲ့ hookup မိတ်ဖက်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားအရေအတွက်နှင့်ပိုမိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ရှိသည်ဖို့အစီအစဉ်များနှင့်အတူညစ်ညမ်းနှင့်၎င်း၏အသင်းကိုပိုမိုမကြာခဏကြည့်ရှုအကြားဆက်ဆံရေးပုံမှန်ဖြစ်သွားကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် အနာဂတ်။42 ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု၏နှုန်းထားများလည်းနှစ်ဦးစလုံးသည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုစားသုံးသူကြိုးစားနေသို့မဟုတ်ရှိခြင်းစိတ်ဝင်စားသည့်ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွင်ဖော်ပြပါရှိသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအမျိုးအစားအတွက်စေ့စပ်ခဲ့သည်ကိုဖော်ပြကြောင်းဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုတိုးနဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်။43 ညစ်ညမ်းကြည့်ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေး၏ရင်းမြစ်ကြောင်းသဘောတူသူတို့တွင်ကွန်ဒုံးများအသုံးပြုမှုအတွက်ကျဆင်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။44 နောက်ဆုံးအနေနဲ့က "မပျော်တစ်ဦးချင်းစီအဘို့အပေါ့ပေါ့လိင်အတွက်စေ့စပ်, ဒါပေမယ့်အလွန်ပျော်ရွှင်တစ်ဦးချင်းစီ၏ပေါ့ပေါ့လိင်အပြုအမူမသက်ဆိုင်သောခဲ့ဘဲလျက်၏အလေးသာအတွက်အချိန်တိုးမြှင့်ကျော်နီးပါးခုနစ်ဆနှင့်အတူဆက်နွယ်။ " ဖြစ်ပါတယ်45(p67)
အများကြီးသုတေသနလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုဆက်ဆံရေးဟာညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဇာတ်ညွှန်းအတွက်နည်းလမ်းများကိုနားလညျဖို့ပိုပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုလုပ်ငန်းစဉ်-လိုအပ်ပါတယ်အတွက် activation-The သိမြင်မှုပေါင်းကူးခြေလှမ်း, စိတ်နေသဘောထားနှင့်အပြုအမူဖို့ညစ်ညမ်းဇာတ်ညွှန်း၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်လျှောက်လွှာများအကြားဆက်ဆံရေးကိုရှာဖွေစူးစမ်းပြုမိခဲ့သနေစဉ် စိတ်ထဲမှာ activated ရောက်လာပါတယ်။
ညစ်ညမ်း၏သိမြင်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့အပေါ်အစောပိုင်းသုတေသနပြုအဖြစ်မှန်၏ပုံစံမျိုးစုံသဘောထားအမြင်ကြည့်ရှုမကြာခဏရသောလမ်းကိုဖော်ပြသည်။ ပေတရုနှင့် Valkenburg46(p227) ညစ်ညမ်းထိုကဲ့သို့သောသူတို့စောင့်ကြည့်ပိုမိုညစ်ညမ်းကြောင်းမြီးကောင်ပေါက်ထဲမှာ "မှတ်ဉာဏ်အတွက်လိင်-related သိမြင်မှု" ကိုဖန်တီးပေးသည် ပို. သူတို့ပစ္စည်းအစစ်အမှန်ကမ္ဘာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ယုံကြည်ဖို့ဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Tsitsika et al ။47(p549) ဂရိမြီးကောင်ပေါက်အကြား, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းလှုံ့ထိတွေ့ "လိင်နှင့်ဆက်ဆံရေးဆီသို့အထင်မြင်မှားစေသောသဘောထားများနှင့် ပတ်သက်. လက်တွေ့သဘောထား။ " အခြားသုတေသနလူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, အစိတ်အပိုင်းအတွက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆုလာဘ်ပေါ်တွင်သီးသန့်အာရုံအားဖြင့်လှုံ့ဆော်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည် (ဆိုလိုသည်မှာကုန်ကျစရိတ်မဆိုမပါဘဲ။ , အပျြောအပါး) (ဆိုလိုသည်မှာ။ , ကတိကဝတ်သို့မဟုတ်ရောဂါ),48 အရှင်ကြည့်ရှုနေစဉ်အတွင်းအသုံးပြုသော forethought များ၏အဆင့်ကိုလျော့ကျလာ။49 တစ်ဦး heuristic script ကိုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောသို့မဟုတ်ချက်ချင်းအခြေအနေများသွားလာအတွက်၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုဆိုလိုအဖြစ်သို့သော်ညစ်ညမ်း conceptualize ခြင်းငှါ၎င်း, တစ်နည်းအတွက်, တကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံစဉ်အတွင်းအပေါ်တတ်သောအရာကိုအကြောင်းကြား။
ယခင်သုတေသန၌လိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာအမျိုးသားများ၏အတွေးအမြင်နှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုပြုစဉ်သူတို့၏အဖော်နှင့်ပါ ၀ င်ပတ်သက်သူများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အခန်းကဏ္explကိုစူးစမ်းလေ့လာခဲ့သည်။50 ညစ်ညမ်းလိင်စဉ်အတွင်းသူတို့၏စိတ်ထဲတွင်အတွက်တက်ကြွစွာအခန်းကဏ္ဍကစားမယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ကိုမေးမြန်းအဖြစ်သူတို့လိင်၏လုပ်ရပ်စဉ်အတွင်းသူတို့ကိုယ်သူတို့နှင့်၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ပတ်သက်. ခံစားခဲ့ရပုံကို။ ရလဒ်များသည်လူကိုသူလိင်ကာလအတွင်းအသုံးပြုခဲ့ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်, watched သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏အထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းလိင်အပြုအမူကိုတောင်းဆိုလျက်, တမင်တကာ arousal ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိင်စဉ်အတွင်းညစ်ညမ်းပုံတွေကို conjure ပိုမိုညစ်ညမ်းပြသခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းကြည့်လည်းအဆိုးတနာတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ကရငျးနှီးအပြုအမူတွေကိုခံစားနဲ့ဆက်စပ်ပေမယ့်သူ့ကိုယ်ပိုင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ပုံရိပ်ကိုကျော်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားအသင်းအဖွဲ့များတိုက်ရိုက်နှင့် unmediated ခဲ့ကြသည်။ ညစ်ညမ်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေကိုမိမိနှင့်၏သဘောထားအမြင်အဖြစ်တနာတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံစဉ်အတွင်းကသူ့ခံစားချက်တွေကိုနှင့်သဘောထားများအတွက်ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဇာတ်ညွှန်း၏ activation တစ်ခုတိုးလာတိုက်ရိုက်ဆက်စပ်ကြည့်ရှု။
ဒီလေ့လာမှုမှာအမျိုးသမီးတွေရဲ့အာရုံကိုလှည့်ပြီးမေးခွန်းတစ်ခုကိုလည်းမေးခဲ့တယ်။ လိင်မှုကိစ္စမှာလိင်ကိစ္စမှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေဟာအမျိုးသမီးတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတက်ကြွတဲ့အခန်းကဏ္playကနေပါဝင်သလား။ စီးပွားဖြစ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏လိင်ဇာတ်ညွှန်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အကြောင်းအရာများသည်အမျိုးသမီးများအပေါ်အလွန်အမင်းရန်လိုတတ်သည်။4 နှင့် hypersexualized မီဒီယာမိန်းကလေးများ၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်ဖိုးထားခြင်းနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာပုံရိပ်ကိုလျော့နည်းစေသည့်နည်းလမ်းများ,51 ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေလှုပ်ရှားမှုသည်အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံအပေါ်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိကျသောယူဆချက်များမှာတစ်ပြိုင်နက်တည်းစစ်ဆေးသည့်အခါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အောက်ပါတို့နှင့်ဆက်နွယ်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည်။
H3: တစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်စဉ်အတွင်းရင်းနှီးသောပြုမူသောအမှုအနိမ့် Self-အစီရင်ခံတင်ပြခံစား။
ပိုကြီးတဲ့, နိုင်ငံစုံလေ့လာမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်43,50 ကျွန်တော်တို့ရဲ့နမူနာ 706 ဖြေဆိုသူ (တွေ့မြင်ပါဝင်သည် စားပွဲတင် 1 ) လူဦးရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အဘို့။ , အမေရိကန်, အမျိုးသမီးလိင်, 18-29 အသက်နှစ်များတွင်နေထိုင်လိင်ကွဲတိမ်းညွတ်နှင့်အနည်းဆုံးကြိုတင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတှေ့အကွုံခဲ့ပွီးလြှငျ: Inclusion စံအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ကြသည်။ အများစုမှာပါဝင်သူ (85.1%) သူတို့တစ်တွေအများပြည်သူကောလိပ်သို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်သို့တက်ရောက်ညွှန်ပြ။ (85.1%) အများစုမှာ Non-ဟစ်စပန်းနစ်ဖြူ၏။ ပျမ်းမျှအသက် 19.82 နှစ်ပေါင်း (စံသွေဖည် [SD က] = 1.65) ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤအသင်တန်းသားများ၏ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအုပ်ထိန်းသူများ၏ (66% ကျော်) အများစုနေတဲ့ကောလိပ်ကျောင်းဒီဂရီပြီးစီးခဲ့သည်။ လေးဆယ်တစ်ရာခိုင်နှုန်းသဘောတူသို့မဟုတ်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဘာသာရေးယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုရန်အရေးကြီးပါသည်ခဲ့ကြောင်းသဘောတူသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့တစ်ခုတည်းသို့မဟုတ် nonmonogamous ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်းသတင်းပို့အားလုံးသင်တန်းသားများကိုကျူးလွန်ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ဖို့မစဉ်းစားခဲ့ကြသောကြောင့်လက်ထပ်, သင်တန်းသားများကို monogamous ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်းသတင်းပို့သော်လည်း, ကြားဆက်ဆံရေးအဆင့်အတန်းကို coded, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်နှင့်အတူ cohabiting ကျူးလွန်ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်းအဖြစ် coded ခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းသားများကို၏လေးဆယ်ရှစ်ရာခိုင်နှုန်းကိုကျူးလွန်ဆက်ဆံရေးရှိကြ၏နှင့် 50.1% ကြဘူး။
စားပွဲတင် 1 ။ အဆိုပါအပြည့်အဝနမူနာများအတွက်လူဦးရေဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက် (N = ၂၀706)
M က (SD)
နှစ်အတွင်းအသက်, - 19.82 (1.65)
ဟစ်စပန်းနစ်မဟုတ်သောအဖြူရောင် 601 (85.1) -
လူမည်း / အာဖရိကန်အမေရိကန် 21 (3.0) -
အာရှ 27 (3.8) -
ဟစ်စပန်းနစ် / လက်တီနာ 29 (4.1) -
native အမေရိကန် 1 (0.1) -
ပစိဖိတ်ကျွန်းသား 1 (0.1) -
Multiracial / အခြား 24 (3.4) -
ပရိုတက်စတင့်ခရစ်ယာန် 325 (46.0) -
ကက်သလစ်ဘာသာဝင် 216 (30.6) -
ဂျူး 24 (3.4) -
အခြား 16 (2.3) -
ဘာသာတရားမရှိ 119 (16.9) -
ယာနျဘာသာတရားကိုa - 3.78 (1.66)
မဟုတ်ဘူး 322 (45.6) -
nonmonogamous ကြားဆက်ဆံရေး၌တည်၏ 32 (4.5) -
တစ် ဦး တည်း monamamous ဆက်ဆံရေးမှာတော့ cohabiting မဟုတ်ပါဘူး 311 (44.1) -
အတူတကွလက်ထပ်မဟုတ် 18 (2.5) -
အိမ်ထောင်သည် 10 (1.4) -
ဘယ်တော့မှလိင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုရ 123 (17.4) -
အသက် ၁၂ နှစ်အောက်3(0.4) -
၂၁-၄၀ နှစ် 85 (12.0) -
၂၁-၄၀ နှစ် 384 (54.4) -
၂၁-၄၀ နှစ် 103 (14.6) -
၂၂ နှစ်နှင့်အထက်6(0.8) -
အထက်တန်းကျောင်းဒီဂရီထက်နည်း 14 (2.0) -
အထက်တန်းကျောင်းဒီဂရီသို့မဟုတ်ညီမျှ 100 (14.2) -
တချို့ကကောလိပ်, ဒီဂရီမရှိ 103 (14.6) -
ကောလိပ်ဒီဂရီ 226 (32.0) -
ဘွဲ့သို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်ဒီဂရီ 244 (34.6) -
အထက်တန်းကျောင်းဒီဂရီထက်နည်း 11 (1.6) -
အထက်တန်းကျောင်းဒီဂရီသို့မဟုတ်ညီမျှ 91 (12.9) -
တချို့ကကောလိပ်, ဒီဂရီမရှိ 106 (15.0) -
ကောလိပ်ဒီဂရီ 310 (43.9) -
ဘွဲ့သို့မဟုတ်အဆင့်မြင့်ဒီဂရီ 179 (25.4) -
aတုံ့ပြန်ချက် 1 မှ6(မမှာအားလုံးအရေးကြီးသော) မှတစ်စကေး (အလွန်အရေးကြီးပါသည်) ရက်နေ့တွင် coded ။
မတိုင်မီ dyadic လိင်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများတွင်အနည်းဆုံးအောက်ပါလုပ်ဆောင်မှုများပါဝင်သည်။ သူတစ်ပါးနှင့်အဝတ်မဝတ်ရခြင်း၊ သူတစ်ပါး၏လိင်အင်္ဂါများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း၊ ပါးစပ်၊ မိန်းမကိုယ်နှင့်စအိုဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။ လေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့် (၈၂.၃%) ပါ ၀ င်သူအများစုသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ ဖြေကြားသူ ၅၈၁ ဦး အနက်မှ ၈၈ သည်အသက် ၁၆ နှစ်မပြည့်မီတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီး ၃၈၄ ဦး သည်အသက် ၁၆ နှစ်မှ ၁၈ နှစ်အကြားလိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြပြီးကျန် ၁၀၉ ဦး မှာအသက် ၁၉ နှစ်နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ကြသည်။
ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုပျမ်းမျှအားဖြင့်မေးခွန်း, (1) သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ပုံကိုမကြာခဏသင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုနိုင်သည်ပါဘူး။ အဆိုပါပစ္စည်းသည် 8 =, 1 = တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ထက်လျော့နည်း,23 = တစ်ကြိမ်တစ်လ, အကြိမ်အနည်းငယ်တစ်နှစ် = ဘယ်တော့မှ,45 = 6-, တစ်လအကြိမ်အနည်းငယ် = (တစ်ဦး 1-အမှတ် Likert စကေးအပေါ်ဖြေကြားခဲ့သည်2ရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်,7= 3-5 ရက်ပေါင်းတစ်ပါတ်နှင့် 8 = နေ့စဉ်သို့မဟုတ်နီးပါးနေ့စဉ်) ။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းမှပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှုနှင့်သူတို့ညစ်ညမ်းရယူဖို့အသုံးပြုမီဒီယာ၏ဦးစားပေးသတင်းရင်းမြစ်မှာဖြေဆိုသူသူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်မေးတယ်။
လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသို့မဟုတ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ပတ်သက်သည့်မေးခွန်းများသုံးခုသည်သင်တန်းသားများအနေဖြင့်အပြာစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ပတ်သက်သည့်အတွေးများကိုအကဲဖြတ်သည်။ (၁) ငါအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံသောအခါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်ခေါင်းထဲထည့်သည်။ (၂) ငါအိမ်ထောင်ဖက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိစဉ်းစားသည်။ (၃) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းဖြင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းထက် ပို၍ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်။ တစ်ခုချင်းစီကို 1 (ဘယ်တော့မှ) မှ2(အစဉ်မပြတ်) မှ3မှတ် Likert စကေးအပေါ်ဖြေကြားခဲ့သည်။ စကေးများအတွက် Cronbach ရဲ့ alpha5ဖြစ်ခဲ့သည်။
အသွင်အပြင်နှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာမှုများကိုမေးခွန်း ၃ ခုခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။ (၂) မှောင်မည်းနေလျှင်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမမြင်နိုင်ရန်ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံရန်သက်တောင့်သက်သာသာရှိသည်။ (၃) လက်တွဲဖော်အသစ်နှင့်ပထမဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံလျှင်ကျွန်ုပ်၏အဖော်သည်အဝတ်အစားမရှိဘဲကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုမြင်တွေ့ရခြင်းအားဖြင့်ပြတ်တောက်သွားမည်ကိုကျွန်ုပ်စိုးရိမ်သည်။ ပစ္စည်းတစ်ခုစီကို ၁ မှ (လုံးဝသဘောမတူ) မှ ၆ အထိ (၆ ချက်အမှတ် Likert စကေး) ဖြင့်ဖြေကြားခဲ့သည် (အပြည့်အစုံသဘောတူသည်) စကေးများအတွက် Cronbach ရဲ့ alpha 1 ဖြစ်ခဲ့သည်။
လိင်ဆက်ဆံစဉ်အတွင်းရင်းနှီးသောအပြုအမူများခံစားမှုအားမေးခွန်း ၃ ခုကအကဲဖြတ်သည်။ (က) ကျွန်ုပ်၏လိင်ကြင်ဖော်ဖက်နှင့်ဆက်ဆံခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ (၂) လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကနမ်းခြင်းကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ နှင့် (2) ကျွန်ုပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအချိန်ကုန်သက်သာစေလိုသည်။ ပစ္စည်းတစ်ခုစီကို ၁ မှ (လုံးဝသဘောမတူ) မှ ၆ အထိ (၆ ချက်အမှတ် Likert စကေး) ဖြင့်ဖြေကြားခဲ့သည် (အပြည့်အစုံသဘောတူသည်) စကေးများအတွက် Cronbach ရဲ့ alpha3ဖြစ်ခဲ့သည်။
အရှေ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့နှစ်ပါးတို့သည်အရှေ့တောင်အတွက်တဦးတည်းနှင့်အလယ်ပိုင်းအဘိဓါန် South အတွက်တဦးတည်း: ဒီစီမံကိနျးကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လေးတက္ကသိုလ်ကျောင်းခွဲများအနှံ့အရပျကိုလုယူသောယဉ်ကျေးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတစ်ခုပူးပေါင်း, multisite လေ့လာမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ အားလုံးပါဝင်တက္ကသိုလ် Institutional ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့စီမံကိန်းအတည်ပြုခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုအီးမေးလ်, Flyer, သို့မဟုတ်အခြားကြေညာချက်များမှတဆင့် 2011 ပေါက်မှနွေဦး 2012 ကနေစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ်ထမ်းခေါ်ယူမှုပစ္စည်းများလေ့လာမှုရည်ရွယ်ချက်ပါဝင်မှုမေးခွန်းများကိုအချို့လိင်ကြောင်းတတျနိုငျသရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဘာသာစကားပါဝင်သည်ကြောင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအပါအဝင်အတှေး, ခံစားခကျြမြားနှငျ့အပြုအမူတွေအကြောင်းမေးမလျှောက်သောမေးခွန်းများ၏စီးရီးဖြေဆိုခြင်းပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားတွေ, ယုံကြည်မှုများနှင့်အပြုအမူတွေကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်သတ်မှတ်ထားသော (ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်အပိုင်းများသို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများအမည်များအပါအဝင်) ထိုးစစ်ဖြစ်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, တုံ့ပြန်မှုအမည်ဝှက်မှတ်တမ်းတင်ထားမယ်လို့။ သင်တန်းသားများကို SurveyMonkey အပေါ် posted အွန်လိုင်းမှစစ်တမ်းမှညွှန်ကြားကြသည် ဟူ. ၎င်း, တစ်ခုချင်းစီကိုစုဆောင်း site ကိုထူးခြားတဲ့ link ကိုခဲ့ရသည်။ သင်တန်းသားများကိုပထမဦးဆုံးသဘောတူညီခကျြပေး, အဲဒီနောက်စစ်တမ်းပြီးပါကရှေ့တော်၌မိမိတို့အရည်အချင်းပြည့်မီအတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။ ပါဝင်မှု ~30 မိနစ်ကိုယူ။ စစ်တမ်းပြီးစီးပြီးနောက်သင်တန်းသားများကိုသုံးငွေသားဆု (တဦးတည်း $ 100 နှစ်ယောက် $ 60 ဆုကျပန်းချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်) ၏တဦးတည်းအနိုင်ယူဖို့ Raffles ထဲသို့မဝင်ရဖို့အခွင့်အလမ်းပေးသောခဲ့ကြသည်။
ဖော်ပြရန်စာရင်းဇယားညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်းအပေါ်အခြေနှုန်းမှာဒေတာများကိုအသုံးပြုသွားမည်ခဲ့ကြသည်။ အားလုံးစဉ်ဆက်မပြတ် variable တွေကိုအဘို့အနည်းလမ်နှင့် SDs (တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်စားပွဲတင် 2) ။ Skewness နှင့် kurtosis စာရင်းဇယားနှင့် Histogram ပုံမှန်၏ယူဆချက်များအတွက်လေ့လာခဲ့ကြသည်။ Bivariate ကြဲဖြန့်ကွက် Linear ၏ယူဆချက်ဆန်းစစ်ဖို့အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ တစ်ချိန်ကတစ်နှစ်လျှင်သို့မဟုတ်ဘယ်တော့မှထက်လျော့နည်းဖြစ်ပေါ်အဖြစ်အဖော်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်ပါဝင်သူများ၏အများစုသည်မဟုတ်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံသောကြောင့်, ကျနော်တို့နောက်ထပ်စမ်းသပ်မှုဤ variable တွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့ရုံကို item အကဲဖြတ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအပေါ်အစားအာရုံစူးစိုက် ။
စားပွဲတင်2။ ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုများအတွက်ဖော်ပြရန်စာရင်းအင်းများ
M က (SD) သို့မဟုတ် N (%)
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု frequencya (N = ၂၀591) 2.50 (1.95)
ဘယ်တော့မှမ 334 (56.5%)
တစ်နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ်ထက်နည်း 16 (2.7%)
တစ်နှစ်လျှင်အကြိမ်အနည်းငယ် 68 (11.5%)
တစ်လလျှင်တစ်ကြိမ် 42 (7.1%)
တစ်လလျှင်အကြိမ်အနည်းငယ် 73 (12.4%)
တစ်ပတ်လျှင် 1-2 နေ့ရက်များ 38 (6.4%)
တစ်ပတ်လျှင် 3-5 နေ့ရက်များ 16 (2.7%)
နေ့စဉ်သို့မဟုတ်နီးပါးနေ့စဉ်4(0.7%)
ညစ်ညမ်းမှပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှာအသက်အရွယ် (နှစ်အတွင်း) (N = ၂၀586)
10 လက်အောက်တွင် 40 (6.8%)
19 သို့မဟုတ်အထက် 33 (5.6%)
ညစ်ညမ်းရယူဖို့အသုံးပြုမူလတန်းသတင်းရင်းမြစ် (N = ၂၀295)
အင်တာနက်ဝက်ဘ်ဆိုက်များ 265 (89.8%)
ကေဘယ်လ်တီဗီ၊ ဝယ်လိုအားရှိသည့်ဗီဒီယို၊ 14 (4.7%)
မဂ္ဂဇင်းများ9(3.1%)
ဒီဗီဒီ3(1.0%)
အခြား (ဥပမာမိတ်ဖက်များနှင့်ရုပ်ပြ၏။ , စာအုပ်များ, ခေါ်ဆောင်သွားဓာတ်ပုံများကို)4(1.4%)
aတုံ့ပြန်ချက် 1 (နေ့စဉ်သို့မဟုတ်နီးပါးနေ့စဉ်) မှ 8 (ဘယ်တော့မှ) coded ။
အယူအဆစမ်းသပ်ခြင်းမပြုမီ, ကျွန်တော်တစ်ဦး confirmatory အချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးတိုင်းတာခြင်းမော်ဒယ်အကဲဖြတ်။ ယူဆချက်ထို့နောက်တဦးတည်း exogenous တိုင်းတာ variable ကို (တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေများအတွက်အသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်း) နှင့်သုံး endogenous အချက်များ (လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုနှင့်စဉ်အတွင်းစပ်လျဉ်းညစ်ညမ်းအကြံ, လိင်စဉ်အတွင်းရင်းနှီးသောပြုမူသောအမှုခံစားအသုံးချကြောင်းအများဆုံးဖြစ်နိုင်ခြေကိုခန့်မှန်းသုံးပြီးနှစ်ခုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်များနှင့်အတူစမ်းသပ်ပြီး ဖြစ်. , ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးလုံခြုံမှု) ။ တစ်ဦးကစက္ကန့်မော်ဒယ်ငါးခု exogenous covariates (အသက်, အဖြူလူမျိုး, ယာနျဘာသာတရားကို, ကျူးလွန်ကြားဆက်ဆံရေးအခြေအနေ, နှင့်ညစ်ညမ်းမှပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှာအသက်အရွယ်) ပါဝင်သည်။ အားလုံး exogenous variable တွေကို-ကွဲပြားပူးတွဲခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ chi စတုရန်းမကြာခဏကြီးမားသောနမူနာအရွယ်အစားနှင့်အရှုပ်ထွေးမော်ဒယ်များနှင့်အတူသိသာသောကွောငျ့,52 အကယ်၍ chi စတုရန်းနှင့်ဒီဂရီလွတ်လပ်မှုအချိုးအစား <၃ ဖြစ်ခဲ့ရင်နှိုင်းယှဉ် Fit အညွှန်းကိန်း (CFI)> 3၊ RootEA Square Square Approximation of RIMEA (RMSEA) <0.95 ဖြစ်မယ်ဆိုရင်နမူနာပုံစံကောင်းကိုရှာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။53 Non-အသိုက်မော်ဒယ်များ၏ဆွေမျိုးစွမ်းဆောင်ရည်နှိုင်းယှဉ်ဖို့, Akaike ပြန်ကြားရေးစံနှုန်း (AIC) အသုံးပြုသွားမည်ခဲ့သည်။ သေးငယ် AIC တန်ဖိုးများကိုပိုကောင်းတဲ့မော်ဒယ်မထိုက်မတန်ဖော်ပြသည်။54 ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း SPSS ဗားရှင်း 21 နှင့် Amos ဗားရှင်း 18 နှင့်အတူပြီးစီးခဲ့ကြသည်။
စားပွဲတင်2ပါဝင်သူများညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြရန်စာရင်းဇယားများကိုပြသည်။ ပါဝင်သူအများစုသည်ယခင်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ထိတွေ့ဖူးခြင်း၊ ပါဝင်သူများ၏သုံးပုံတစ်ပုံသည် ၁၃ နှစ်အရွယ်မတိုင်မီပထမ ဦး ဆုံးအပြာစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းကိုခံခဲ့ရသည် သင်တန်းသားများကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခဲ့သည်။ ဖြေဆိုသူ ၅၉၁ ဦး အနက်တစ်ဝက်နီးပါး (၄၃.၅%) သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်အနည်းဆုံးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအချို့ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုခဲ့သည့်သင်တန်းသားများအကြားတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုမှုအကြိမ်အရေအတွက်သည်တစ်လလျှင်အကြိမ်အနည်းငယ်ဖြစ်သည်။ အများအားဖြင့်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုကြည့်ရှုလေ့ရှိသည့်မီဒီယာရင်းမြစ်အများအားဖြင့်ပါဝင်သူများသည်အင်တာနက်ဖြစ်သည်။
ကျနော်တို့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကြိမ်နှုန်းနှင့်ဆက်စပ်သောဘယ်လိုလူဦးရေအချိုးအစား variable တွေကိုစူးစမ်းလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ အသက်, ပြိုင်ပွဲ / လူမျိုးစုများနှင့်ကျူးလွန်ကြားဆက်ဆံရေးအဆင့်အတန်းကိုသိသိသာသာတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြိမ်ရေနဲ့ဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါ။ သာယာနျဘာသာတရားကိုသိသိသာသာများနှင့်အဆိုးတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် (r = -0.143, p <0.001, N = 589) ။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအတွက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု၏ကြိမ်နှုန်းသည်အဓိကရလဒ်များနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်သည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့သည်။ ဤအအသင်းအဖွဲ့များများအတွက် bivariate ဆက်စပ်မှုအတွက်တင်ပြနေကြသည် စားပွဲတင် 3.
စားပွဲတင်3။ လေ့လာမှု Variables ကိုများအတွက် Bivariate ဆက်စပ်မှု
တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့အညစ်ညမ်း၏ (1) ကြိမ်နှုန်း 1.00
(2) PT အချက်: ညစ်ညမ်းကနေပုံရိပ်တွေကိုလိင်စဉ်အတွင်းငါ့ဦးခေါင်းသို့ရောက် 0.351*** 1.00
(3) PT အချက်; လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့်ညစ်ညမ်းမြင်ကွင်းများစိတ်ကူး 0.244*** 0.830*** 1.00
(4) PT အချက်: ညစ်ညမ်းမှ masturbating လိင်ထက်ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဖြစ်ပါသည် 0.324*** 0.448*** 0.451*** 1.00
(5) အိုဝါအချက်: ငါ့ကိုယ်ငါ့အဖက်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်ဘယ်လိုစိုးရိမ် 0.036 0.074 0.099* 0.084 1.00
(6) အိုဝါအချက်: ကမှောင်မိုက်ဖြစ်လျှင်ငါသာလိင်ဆက်ဆံရန်လုံလောက်သောသက်သာခံစားရနိုင် 0.009 0.119* 0.140** 0.181*** 0.605*** 1.00
(7) အိုဝါအချက်: ငါသည်ငါ၏အဖော်အကြှနျုပျ၏ကိုယျခန်ဓာကိုမြင်လျှင်အားဖြင့်ပိတ်ထားရမည်ကိုစိုးရိမ် 0.055 0.124** 0.119* 0.131** 0.556*** 0.608*** 1.00
(8) EI အချက်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်နှင့်အတူ cuddling ပျော်မွေ့ -0.055 -0.119* -0.096* -0.133** 0.057 -0.083* -0.033 1.00
(9) EI အချက်: လိင်စဉ်အတွင်းနမ်းနဲ့တူ -0.004 -0.057 -0.056 -0.053 0.099* -0.009 0.001 0.512*** 1.00
(10) EI အချက်: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော် caressing နဲ့တူ -0.060 -0.064 -0.066 -0.082 -0.035 -0.147*** -0.070 0.439*** 0.555*** 1.00
EI, ရငျးနှီး၏ခံစား; IA, ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးလုံခြုံမှု; PT, ညစ်ညမ်းအတွေးများကို။
လေ့လာမှုယူဆချက်အကဲဖြတ်ခြင်းမပြုမီ, ငါတို့ confirmatory အချက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ငုပ်လျှိုးနေ variable တွေကိုများ၏တိုင်းတာခြင်းအကဲဖြတ်။ အဆိုပါခြုံငုံမော်ဒယ်ကောင်းစွာχဒေတာ fit2/ DF အချိုး RMSEA = 2.34-0.98 များအတွက် = 0.04, CFI = 90, RMSEA = 0.03 နှင့် 0.06% ယုံကြည်မှုကြားကာလ။ ပစ္စည်းများအားလုံး (မိမိတို့၏အချက်များပေါ်သို့သိသိသာသာ loadedp <0.001) ။ ၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်သောအချက်များပေါ်သို့ထင်ရှားသောကိန်းရှင်များနှင့်စံတင်ထားသည့်ဝန်များအတွက်ဖော်ပြရန်စာရင်းဇယားများကိုဖော်ပြထားသည် စားပွဲတင် 4.
စားပွဲတင်4။ လေ့လာမှုရလဒ် Variables ကိုများအတွက်ဖော်ပြရန်စာရင်းအင်းနှင့် Standard load
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများသည်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကျွန်ုပ်၏ခေါင်းပေါ်သို့ရောက်လာသည် 1.46 (0.83) 0.90
လိင်ဆက်ဆံစဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိစိတ်ကူးပါ 1.31 (0.71) 0.92
အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းသည်လိင်ထက် ပို၍ စိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်သည် 1.27 (0.63) 0.50
ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကိုမည်သို့ကြည့်မည်ကိုကျွန်ုပ်စိုးရိမ်သည် 3.89 (1.46) 0.74
ငါမှောင်မိုက်ခဲ့လျှင်လိင်ဆက်ဆံဖို့လုံလောက်တဲ့သက်သာခံစားရနိုင်ပါတယ် 2.59 (1.42) 0.82
ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အားကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပိတ်ထားမည်ကိုကျွန်ုပ်စိုးရိမ်သည် 2.97 (1.57) 0.75
လိင်ကြင်ဖော်ဖက်နှင့်ဆက်ဆံခြင်းကိုနှစ်သက်ပါ 5.54 (0.90) 0.64
လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကနမ်းခြင်းကဲ့သို့ 5.49 (0.81) 0.80
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက် caressing လိုပဲ 5.09 (0.95) 0.69
aတုံ့ပြန်ချက် 1 (အမြဲ) မှ5(ဘယ်တော့မှ) coded ။
bတုံ့ပြန်ချက် 1 မှ6(ပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောမတူ) (ပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောတူ) coded ။
တစ်ဦးချင်းစီယူဆချက်အကဲဖြတ်ခြင်းမပြုမီ, ကျနော်တို့ခြုံငုံမော်ဒယ်၏မထိုက်မတန်အကဲဖြတ်။ အဆိုပါမော်ဒယ်χဒေတာတစ်ခုလုံလောက်သောမထိုက်မတန်ပေးအပ်2/ DF အချိုး = 3.13, CFI = 0.96, RMSEA = 0.06, RMSEA = 90-0.04 များအတွက် 0.07% ယုံကြည်မှုကြားကာလနှင့် AIC = 167.39 (သဖန်းသီး။ 1) ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ဒယ်အတွက်လူဦးရေအချိုးအစား covariates ၏ပါဝင်မှုလည်း covariates မပါဘဲရိုးရှင်းမော်ဒယ်χကဲ့သို့ကောင်းသော, ကောင်းမွန်သောမော်ဒယ်လ်မထိုက်မတန်အကြံပြုပေမယ့်မရ2/ DF အချိုး = 2.56, CFI = 0.95, RMSEA = 0.04, RMSEA = 90-0.04 များအတွက် 0.06% ယုံကြည်မှုကြားကာလနှင့် AIC = 305.55 (သဖန်းသီး။ 2).
သဖန်းသီး။ 1 ။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ် variable တွေကိုအကြားစံလမ်းကြောင်းကိုကိန်းဖေါ်ပြခြင်းအခြေခံအဆောက်အဦးပုံစံ။ *p <0.05; **p <0.01; ***p <0.001 ။ ဖတ်ရှုနိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်စေရန်၊ အလင်းမီးခိုးရောင်.
သဖန်းသီး။2။ လူဦးရေအချိုးအစား covariates, ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့် relational variable တွေကိုအကြားစံလမ်းကြောင်းကိုကိန်းဖေါ်ပြခြင်းအခြေခံအဆောက်အဦးပုံစံ။ *p <0.05; **p <0.01; ***p <0.001 ။ ဖတ်ရှုနိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်စေရန်၊ အလင်းမီးခိုးရောင်.
H1: တစ်အဖော်နှင့်အတူလိင်စဉ်အတွင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ၏တိုးမြှင့် Thoughts
ကျနော်တို့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုလိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသော / ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအတှေးအစိတ်လှုပ်ရှားမှုရယူသို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းရန်အဖြစ်သို့မဟုတ်တစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ကျော်ညစ်ညမ်းများအတွက်ဖော်ပြထားသော preference ကိုအဖြစ်လည်းကောင်း, တစ်ဦးအဖော်နှင့်အတူလိင်စဉ်အတွင်းညစ်ညမ်း၏အကြံအစည်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်ဟုတ်မဟုတ်ကိုမြင်လျှင်စိတ်ဝင်စားခဲ့ကြသည်။ ကျနော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးအယူအဆထောက်ခံခဲ့သည်။ လိင်အချက်စဉ်အတွင်းညစ်ညမ်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေများအတွက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းတို့၏အကြံအစည်များအကြားသိသိသာသာအပြုသဘောအသင်းအဖွဲ့ (ရှိခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 1) ။ ကျနော်တို့လူဦးရေအချိုးအစား covariates (ပါဝင်သည်သည့်အခါတစ်ဦးနှင့်ဆင်တူလမ်းကြောင်းကိုကိန်းလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်သဖန်းသီး။ 2) ။ အဆိုပါ covariates ၏, ညစ်ညမ်းမှပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှာလက်ရှိအသက်အရွယ်နှင့်အငယ်အရွယ်အဟောင်းများကိုတစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုဖို့ဒါမှမဟုတ်စဉ်အတွင်းစပ်လျဉ်းညစ်ညမ်းပိုမိုအကြံအစည်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုတိယယူဆချက်ကလိင်မှုကိစ္စလုပ်ဆောင်စဉ်ကာလအတွင်းတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ပတ်သက်၍ လုံခြုံမှုမရှိခြင်းအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများအကြားဆက်စပ်မှုရှိမရှိမေးမြန်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဒုတိယယူဆချက်နှင့်ဆန့်ကျင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပုံစံတွင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အသွင်အပြင်မလုံခြုံမှုအတွက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်သိသာထင်ရှားသောဆက်နွယ်မှုမရှိပါ (သဖန်းသီး။ 1) ။ လူဦးရေအချိုးအစား covariates အပါအဝင်လမ်းကြောင်းကို nonsignificant ကျန်ရစ်တောင်မှသည့်အခါ (သဖန်းသီး။ 2) ။ အဆိုပါ covariates ၏တစ်ဦးကျူးလွန်ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်းသိသိသာသာရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်နှင့်ပတ်သက်ပြီးနိမ့်မလုံခြုံမှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
H3: တစ်အဖော်နှင့်အတူလိင်စဉ်အတွင်း Intimate တမန်တော်များ၏အောက်ပိုင်းကိုယ်ပိုင်နားဆင်နိုင်ပါတယ်ပျော်မွေ့
သင်တန်းသားများကိုသောသူတို့သည်ထိုကဲ့သို့သော, cuddling, နမ်းရှုပ်ခြင်းနှင့်ခြော့အဖြစ်မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်တွေနဲ့ရင်းနှီးအပြုအမူတွေ, ခံစားဖို့ဒီဂရီအကဲဖြတ်မေးခွန်းများကိုဖြေသည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တတိယအယူအဆဆန့်ကျင်, ညစ်ညမ်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေများအတွက်အသုံးပြုခြင်းနှင့်ရင်းနှီးသောအပြုအမူတွေ (၏ Self-အစီရင်ခံတင်ပြခံစားအကြားမျှသိသာအသင်းအဖွဲ့ရှိခဲ့သဖန်းသီး။ 1) ။ ဤသည် (လူဦးရေအချိုးအစား covariates များ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူမပြောင်းခဲ့ဘူးသဖန်းသီး။ 2) ။ အဆိုပါ covariates ၏တစ်ဦးကျူးလွန်ဆက်ဆံရေးအတွက်ဖြစ်ခြင်းလိင်ရင်းနှီးသောအပြုအမူတွေ၏ Self-အစီရင်ခံတင်ပြခံစားနှင့်ဆက်စပ် (အပြုသဘော) သိသိသာသာဖြစ်ခဲ့သည်။
post ကို hoc မော်ဒယ်ပြုပြင်မွမ်းမံ
တစ်ဦးက Lagrange မြှောက်ကိန်းစမ်းသပ်မှု (ပထမမော်ဒယ်၏မထိုက်မတန်ညွှန်ပြသဖန်းသီး။ 1) လိင်အချက်များစဉ်အတွင်းရင်းနှီးသောပြုမူသောအမှုအသှငျအပွငျနှင့်ခံစားအကြောင်းကိုနှစ်ဦးစလုံးမလုံခြုံမှုမှညစ်ညမ်းအချက်တို့၏အကြံအစည်ကနေလမ်းကြောင်းထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်သိသိသာသာတိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ interaction ကမြားတှငျပါဝငျခွငျးစဉ်ညစ်ညမ်းအတွေးများနှင့်ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်း generated (ညစ်ညမ်း) ရုပ်ပုံများကို Activation လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်မှနိမ့်အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ရရှိလာတဲ့, ကွာ "ဒီမှာနှင့်ယခု" လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြန်အလှန်၏အပေါ်တစ်ဦးအာရုံထဲကနေသူတစ်ဦးဦးဆွဲထုတ်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကသီအိုရီအတရားမျှတသည်ထင်ရှား နှင့်အလားအလာခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားများနှင့် Self-အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်မိတ်ဖက်အကဲဖြတ်အတွက်ကိုးကားစရာအဖြစ်ညစ်ညမ်းအတွက်လုပ်ပါတယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများ၏ salience တိုးမြှင့်။ တကယ်တော့, Meana နှင့် Nunnink55 လိင်စဉ်အတွင်းသိမြင်မှုအသွင်အပြင်-based စိုးရိမ်မှုများကိုသက်ဝင်နှင့်အမျိုးသမီးများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားနှောင့်ယှက်နိုင်ပါတယ်ရှာပါ။ ထိုကြောင့်ငါတို့သည်လိင်ဖို့ဒါမှမဟုတ်စဉ်အတွင်းစပ်လျဉ်းညစ်ညမ်း၏အတွေးများကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်စဉ်အတွင်းသဏ္ဌာန်နှင့်ရင်းနှီးသောလုပ်ရပ်များ (အကြောင်းကိုနှစ်ဦးစလုံးမလုံခြုံမှုအကြားဆက်ဆံရေးကမကထပြုခဲ့ခြင်းရှိမရှိဆန်းစစ်တဲ့နောက်ဆုံးမော်ဒယ်စဉ်းစားသဖန်းသီး။ 3) ။ အဆိုပါခြုံငုံမော်ဒယ်ကောင်းစွာχဒေတာ fit2/ DF အချိုး = 3.53, CFI = 0.95, RMSEA = 0.06, RMSEA = 90-0.05 များအတွက် 0.07% ယုံကြည်မှုကြားကာလနှင့် AIC = 157.35 ။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသာညစ်ညမ်းအချက်တို့၏အကြံအစည်တစ်ခုသိသာခန့်မှန်းနျြရစျ။ အဲဒီနေရာက Application ကို အသုံးပြု. ကြားဝင်ဖြန်ဖြေ၏စမ်းသပ်မှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှု (ရန်သို့မဟုတ်စဉ်အတွင်းစပ်လျဉ်းညစ်ညမ်း၏အတွေးများကိုသွယ်ဝိုက် [unstandardized] အကျိုးသက်ရောက်မှု = -0.02, စံအမှား [အရှေ့တောင်] = 0.01 [-95 မှ -0.041] 0.004% ယုံကြည်မှုကြားကာလဆိုလိုကြောင်းထင်ရှားပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး နှင့်စံချိန်စံညွှန်းမီလမ်းကြောင်းကိုကိန်း = -0.06) တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ရငျးနှီးအချက်အကြား link ကိုကမကထပြုခဲ့။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ညစ်ညမ်းအချက်တို့၏အကြံအစည် (သွယ်ဝိုက် [unstandardized] အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆိုလိုတာ = 0.04, အရှေ့တောင် = 0.02, 95% ယုံကြည်မှုကြားကာလ [0.011-0.077] နှင့်စံချိန်စံညွှန်းမီလမ်းကြောင်းကိုကိန်း = 0.08) ညစ်ညမ်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေများအတွက်အသုံးပြုမှုနှင့်မလုံခြုံမှုများအကြား link ကိုကမကထပြုခဲ့ အချက်။ ဤ post ကို hoc စေ့စပ်ဖြန်ဖြေမော်ဒယ်တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုမော်ဒယ်Δχထက်သာလွန်ခဲ့တာ2 = 17.61, Δdf = 2, p <0.001, ICAIC = 10.04 ။56
သဖန်းသီး။3။ post ကို hoc ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ် variable တွေကိုအကြားစံလမ်းကြောင်းကိုကိန်းဖေါ်ပြခြင်းအခြေခံအဆောက်အဦးပုံစံပြုပြင်မွမ်းမံ။ *p <0.05; **p <0.01; ***p <0.001 ။ ဖတ်ရှုနိုင်မှုကိုတိုးမြှင့်စေရန်၊ အလင်းမီးခိုးရောင်.
Young ကယောက်ျားမိန်းမတို့ကိုဝင်ရောက်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ သာ. ကြီးမြတ်ကြိမ်နှုန်းနှင့်အတူအင်တာနက်ကိုလှည့်နေကြပါတယ်။ သည်အခြားလေ့လာမှုများလိုပဲ,57,58 ကျွန်တော်တို့ဟာအွန်လိုင်းအရင်းအမြစ်များမှ လာ. , အားလုံးနီးပါးသောညစ်ညမ်းစောစောထိတွေ့မှုမြင့်မားမှုနှုန်း, တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ကောလိပ်ကျောင်းထဲသို့ဝင်ရသောအချိန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာအများဆုံး (83%) အမြိုးသမီးမြားကိုအဓိကအားဖြင့်အွန်လိုင်း, ညစ်ညမ်းမြင်ဘူး။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုယခင်သုတေသန၌တွေ့ထက်လူငယ်တစ်ဦးသည်အသက်မှာထိတွေ့မှုမြင့်မားမှုနှုန်းဖော်ပြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, 2008 အတွက်ဆဗီးနား et al ။ မိန်းကလေးများ 9.2% 13 များ၏အသက်အရွယ်မတိုင်မီညစ်ညမ်းထိတွေ့တွေ့ကြုံတွေ့၏ ငါတို့သည်ငါတို့၏ဖြေဆိုသူပိုကြီးတဲ့ရာခိုင်နှုန်း (24.7%) ထိုကဲ့သို့သောအစောပိုင်းထိတွေ့မှုရှိခဲ့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။58 ဤသည်ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ခေတ်သစ်, အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းများကြီးထွားလာအရွယ်အစားနှင့်နယ်ပယ်မှပြောသော59 နှင့်ညစ်ညမ်းနှင့်အတူငြိမ်ဝပ်ယခုအင်တာနက်မှတစ်ဆင့်သုံးစွဲနိုင်သည်။
ဒီလေ့လာမှုမှာအမျိုးသမီးအများစုမတိုင်မီညစ်ညမ်းထိတွေ့ခဲ့ပေမယ့်, သာ 43.5% တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေများအတွက်လက်ရှိစားသုံးမှုကဖော်ပြခဲ့သည်။ လက်ရှိတွင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့အညစ်ညမ်း အသုံးပြု. သူတို့၏အမျိုးအ, သုံးစွဲခြင်း၏ကြိမ်နှုန်းများအတွက်အများဆုံးမကြာခဏထောက်ခံအမျိုးအစားတစ်ကြိမ်တစ်လဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းခဲ့ပါတယ်။ ဖြေဆိုသူအများစု (56.5%) ထိုကဲ့သို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ညစ်ညမ်းသုံးပြီးဘယ်တော့မှသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာအမျိုးသမီးသာလျှင် 0.7% နေ့စဉ်အစီရင်ခံသို့မဟုတ်အနီး-နေ့စဉ်စားသုံးမှု။ အမျိုးသမီးငယ်နီးပါးတူညီအချိုးအစားအတွက်နှစ်ခုမတူကွဲပြားလမ်းကြောင်းအတိုင်းလိုက်နာဟန်: သူတို့အတော်လေးကွာခဏပေမယ့်, သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်သို့ညစ်ညမ်းထည့်သွင်း, ဒါမှမဟုတ်သူတို့အစောပိုင်းတွေ့ဆုံပြီးနောက်စားသုံးမှုကိုရှောင်ကြဉ်ဖြစ်စေ။
အမျိုးသမီးများသည်အမျိုးသားများထက်စားသုံးမှုနှုန်းနိမ့်ကျနေသော်လည်း၊ ညစ်ညမ်းစာပေဇာတ်ကောင်များသည်မိတ်ဖက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများ၏ပုဂ္ဂလဒိexperiences္ဌာန်အတွေ့အကြုံများတွင်အခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုမှုနှုန်းမြင့်မားသောအမျိုးသမီးများသည်အဖော်အဖက်များနှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သည့်အတွေးများကိုပိုမိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပြီးစိတ်လှုပ်ရှားမှုရရှိရန်သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းရန်ထိုအတွေးများကိုမှီခိုအားထားခြင်း (သို့မဟုတ်) လိင်ကြင်ဖော်ဖက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုပိုမိုနှစ်သက်ကြသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုငယ်ရွယ်သောအရွယ်များ၌တွေ့ကြုံခံစားခဲ့ရသောအမျိုးသမီးများ၊ သူတို့သည်အခြားရွေးချယ်စရာလိင်ဇာတ်ညွှန်းများဝယ်ယူရန်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောလိင်ဆိုင်ရာဇာတ်ညွှန်းများ၏စွမ်းအားကိုအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန်သို့မဟုတ်လက်တွဲဖော်နှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးသောအမျိုးသမီးများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သောအတွေးများကိုတင်ပြရန်ပိုဖြစ်နိုင်သည် လက်တွဲဖော်နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ယူဆချက်ဆန့်ကျင်, ငါတို့တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ပုံပန်းသဏ္ဍာန်မလုံခြုံမှု (H2) ၏အတှေ့အကွုံရှိတိုးဘို့ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအကြားတိုက်ရိုက် link ကိုမတှေ့မဟုတ်သလိုကျွန်တော်ညစ်ညမ်းတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေဘို့စားသုံးမှုနှင့်အတူလိင်စဉ်အတွင်းရင်းနှီးသောပြုမူသောအမှုအနိမ့်ခံစားအကြားတိုက်ရိုက်လင့်ခ်ကိုရှာဖွေခဲ့ကြ တစ်ဖက် (H3) ။ သို့သော်နှင့်စိတ်ဝင်စားစရာ post ကို hoc မော်ဒယ်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများအရတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းတွင်အမျိုးသမီးများ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်းသည်သူတို့၏အသွင်အပြင်နှင့် ပတ်သက်၍ မရေရာမှုများတိုးများလာခြင်းနှင့်လိင်မှုကိစ္စတွင်လိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှု၌အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုပိုမိုတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းအားဖြင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းကိုခံစားမှုလျော့နည်းလာခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုညွှန်ပြခဲ့သည်။ တနည်းအားဖြင့်အမျိုးသမီးများအားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံစဉ်အတွင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများနှင့်ပတ်သက်သောအတွေးများနှင့်ဆက်စပ်နေပြီးညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အသွင်အပြင်မလုံခြုံမှုတိုးပွားလာခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်အတွင်းရင်းနှီးသောအပြုအမူများခံစားခြင်းကိုလျော့နည်းစေသည်။ ဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသို့မဟုတ်လိင်ဆက်ဆံခြင်းပြုစဉ်ကာလအတွင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်အဘယ်ကြောင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အသွင်အပြင်မလုံခြုံမှုနှင့်ရငျးနှီးမှုအကြားဆက်နွယ်မှုကိုဖြန်ဖြေပေးနိုင်သလဲ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များသီအိုရီအပေါ်ဆွဲ, ငါတို့ညစ်ညမ်းအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များမိန်းမတို့အဘို့ heuristic activation နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်စေခြင်းငှါ surmise ။ Wright အဆိုအရ,33 သူတို့အပြုအမူတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိနိုင်ပါသည်မတိုင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များစိတ်ထဲမှာ activated ရမည်ဖြစ်သည်။ activation ၏အဆုံးအဖြတ်ပေးပရိသတ်ကိုထိုကဲ့သို့သောအသက်အရွယ်နှင့် / သို့မဟုတ်ကျားမအဖြစ်အချက်များအဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောလိင်စိတ်နိုးထသို့မဟုတ် script ကို-အခွအေနေစာပေးစာယူအဖြစ်အခွအေနေအချက်များပါဝင်နိုင်ပါသည်။15 အပြတ်အသတ်အမြိုးသမီးမြားပစ်မှတ်ထားရာအများစုကိုစီးပွားဖြစ်ညစ်ညမ်းအတွက်အကြမ်းဖက်မှုနှင့်ပျက်စီးခြင်း၏မြင့်နှုန်းထားများ,4 ကအလားအလာအမျိုးသမီးစားသုံးသူများအတွက် script ကို-အခွအေနေစာပေးစာယူအကြား dissonance ဖန်တီးအဖြစ်အမျိုးသမီးများအတွက် script ကို၏ salience နှောင့်အယှက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ရဟန်းတို့ဤသို့လျှင်ဤ dissonance ယောက်ျားဘို့ကိုတင်ပြမပေးကြောင်းအမြိုးသမီးမြားအဘို့အ activation ရန်အတားအဆီးဖန်တီးလိမ့်မည်။ ယောက်ျားအလွယ်တကူသူတို့၏ပျော်မွေ့ဘို့ဒီဇိုင်းနှင့်ပုံဖော်နေတဲ့ဇာတ်ညွှန်းအတွင်းဘာသာရပ်များအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမြင်စေခြင်းငှါနေစဉ်, အမျိုးသမီးစားသုံးသူ script ကိုသူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များအတွက်တက်ကြွစွာဖြစ်လာဘို့အလို့ငှာအကြမ်းဖက်မှုများ / ကျူးကျော်များ၏ပစ်မှတ်အဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုလကျခံဖို့သင်ယူဖို့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဇာတ်ညွှန်းသူမ၏ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ထင်ရှားအတွေ့အကြုံနှင့်အတူစိတ်တိုးပွားစေခြင်းငှါဖြစ်သောကြောင့်တစ်နည်းအားဖြင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦး script ကိုသက်ဝင်မတိုင်မီ heuristic (အမြန်နှင့်တမင်မပါဘဲ) အပြောင်းအလဲနဲ့ဆန့်ကျင်အဖြစ်စနစ်တကျ (သတိ) အပြောင်းအလဲနဲ့တစ်နည်းနည်းလုပ်ဖို့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်, သည်, အသက်, လူဦးရေအချိုးအစားကိုတွေ့သောအခြားသုတေသနနှင့်ကိုက်ညီဖြစ်ပါသည်15 သို့မဟုတ်အခြားလူတစ်ဦးချင်းစီကွဲပြားခြားနားမှု13 လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များနှင့်တစ်ဦးချင်းအကြားဆက်ဆံရေးပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်နိုင်ပါတယ်။
ဤအခြေအနေတွင်လိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှုဆိုင်ရာလိင်ဇာတ်ညွှန်းကိုအမျိုးသားများကပိုမိုလွယ်ကူစွာဖွင့်နိုင်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်အပြာစာပေကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အမျိုးသား၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးပြီးကြားခံဆက်သွယ်မှုတို့အကြား ပိုမို၍ ပေါင်းစည်းညီညွတ်သောတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်မှုရရှိနိုင်သည်။ ယခင်လေ့လာမှုတစ်ခုမှာ50 အမျိုးသားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သောအတွေးများနှင့်တိုက်ရိုက်အပြုသဘောဆောင်ခြင်းနှင့်ရင်းနှီးမှု၏ပျော်ရွှင်မှုကိုတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ တစ်နည်းပြောရလျှင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှုန်းများမြင့်သောယောက်ျားများသည်လိင်မှုကိစ္စတွင်လိင်အကျင့်ယိုယွင်းမှုရှိသည့်လိင်ဆိုင်ရာဇာတ်ညွှန်းကိုအသက်သွင်းထားခြင်းမရှိဘဲရင်းနှီးမှုနည်းပါးသည်။ ထို့အပြင်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအသုံးပြုသောအမျိုးသားများအနေဖြင့်၎င်းတို့နှင့်ရင်းနှီးသောအတွေ့အကြုံများရှိစေကာမူနှိုးဆော်မှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများပိုမိုလိုအပ်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်မိမိကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိခြင်းသို့မဟုတ်အမျိုးသားများအတွက်အသွင်အပြင်နှင့် ပတ်သက်၍ မသေချာမှုတို့အကြားဆက်စပ်မှုမရှိပါ။
သို့သော်၊ ဤလေ့လာမှုတွင်လိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာအယူအဆများသည်လိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာဇာတ်ညွှန်းတွင်ပါ ၀ င်သည့်အခန်းကဏ္mediကိုပါ ၀ င်သည်။ အမျိုးသမီးများသည်တိတ်တဆိတ်တက်ကြွစွာတက်တက်ကြွကြွပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးသမီးများအားလိင်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများတွင်အခန်းကဏ္ play မှပါ ၀ င်ရန်အမျိုးသားများကဲ့သို့ပင်ကြည့်ရှုရုံမျှသာမဟုတ်ဘဲဇာတ်ညွှန်းကိုကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းပြရမည်။ လိင်မှုကိစ္စတွင်လိင်မှုကိစ္စပါ ၀ င်စဉ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုအသက်ဝင်စေသည့်အမျိုးသမီးများသည်ရင်းနှီးမှုနည်းပါးပြီးသူတို့၏အသွင်အပြင်ကိုယုံကြည်စိတ်ချမှုနည်းပါးသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအများစုတွင်တွေ့ရှိရသောအကြမ်းဖက်မှုနှင့်ပျက်စီးခြင်းများအကြားအမျိုးသမီးများ၏ကိုယ်တွေ့အတွေ့အကြုံများအကြားဇာတ်ညွှန်းပိုင်းအရကွဲလွဲမှုသည်အစပိုင်းတွင်အကာအကွယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများသည်လိင်ဆိုင်ရာဇာတ်ညွှန်းကိုအားကိုးလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များအရသူတို့သည်အမျိုးသားများကဲ့သို့အလားတူသို့မဟုတ်ပိုမိုကျဆင်းလာသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုတွေ့ကြုံခံစားနေရသည်။ အမျိုးသားများနည်းတူသူတို့သည်လိင်တူချင်းဆက်ဆံမှုနည်းပါးသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းပြုစဉ်သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချရမှုပိုမိုများပြားလာသည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကတိက ၀ တ်ပြုထားသောဆက်ဆံရေးတွင်လိင်ဆက်ဆံစဉ်ပြုမူလုပ်ဆောင်မှုများတိုးပွားလာခြင်းနှင့်အသွင်အပြင်နှင့်ပတ်သက်သောမရေရာမှုများကိုလျှော့ချရာတွင်အကာအကွယ်အခန်းကဏ္ have ရှိနိုင်သည် မိတ်ဖက်များနှင့်အသွင်အပြင်မလုံခြုံမှု။ ကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များသည်ဤဆက်နွယ်မှုများ၏ညွှန်ကြားချက်ကိုမသတ်မှတ်နိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏အချက်အလက်များအရအနည်းဆုံးအနေဖြင့်၊ ညစ်ညမ်းစာပေဇာတ်ကောင်ကိုဖွင့်သောအခါအမျိုးသမီးများသည်၎င်းတို့၏အမျိုးသားမိတ်ဖက်များနှင့်ပိုမိုယုံကြည်မှုရှိလာစေရန်သို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်ရန်အထောက်အကူမပြုကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ခြုံငုံကြည့်လျှင်ဤအချက်သည်မြင့်မားသောကြိမ်နှုန်းမြင့်သောအမျိုးသမီးစားသုံးသူများသည်သူတို့၏အနိမ့်ကြိမ်နှုန်းထက်အဆပေါင်းများစွာပိုမိုဆိုးရွားသည့် (ပိုမိုလုံခြုံမှုမရှိသော၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုအထူးသဖြင့်ကြိမ်နှုန်းမြင့်သောစားသုံးမှုသည်အမျိုးသားများနှင့်မိတ်ဖက်အမျိုးသမီးများနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအပေါ်ယုံကြည်မှုနှင့်ရင့်ကျက်မှုတိုးလာခြင်းကိုမပြသပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိလေ့လာမှုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံများနှင့်လူငယ်အမျိုးသမီးများ၏လိင်ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးကိုနားလည်ရန်အထောက်အကူပြုသော်လည်း၎င်း၏တွေ့ရှိချက်များကိုလေ့လာမှု၏အကန့်အသတ်များဖြင့်အနက်ဖွင့်သင့်သည်။ အရေးကြီးတာကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေအတွေးတွေရဲ့ဖျန်ဖြေပေးတဲ့အခန်းကဏ္throughကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့လို့ပါပဲ post ကို hoc မော်ဒယ်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း, ကစမ်းသပ်ခံရဖို့တစ်အယူအဆနေဆဲဖြစ်သည်။ ဤတွေ့ရှိချက်များကိုပုံတူကူးယူပြီးထိုအသင်းအဖွဲ့များကိုစူးစမ်းလေ့လာရန်သုတေသနပြုရန်ပိုမိုလိုအပ်သည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏နမူနာသည်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း (အများအားဖြင့်တောင်ဘက်ရှိအဖြူကောလိပ်ကျောင်းသားများ) ကိုကန့်သတ်ထားသည်။ Wright ရဲ့ 3လေးမော်ဒယ်ထိုကဲ့သို့သောလူမျိုး, လူတန်းစားများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်အဖြစ်လူဦးရေအချိုးအစား variable တွေကိုရှာမှီး, activation နှင့် / သို့မဟုတ် application ကို process ကိုဖျန်ဖြေသို့မဟုတ်အလယ်အလတ်နိုငျကွောငျး posits ။ ပိုများသောသုတေသန, အထူးသဖြင့်အရည်အသွေး data တွေကိုအဲဒီမတူကွဲပြားဖြစ်စဉ်များကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမေးခွန်းများတုံ့ပြန်မှုအထီးမိတ်ဖက်တွေနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုပါဝင်ပတ်သက်ကြောင်း, သာလိင်ကွဲအမျိုးသမီးပြပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးခွန်းများကိုတစ်ဦးကျား-ကြားနေထုံးစံ၌ကူညီမှုတစ်စုံတစ်ရာလုပ်နေတဲ့ခဲ့ကြသည်ပေးယူဆ။ ဒါကြောင့်လိင်ကွဲအဖြစ်ဖော်ထုတ်သောမိန်းမတို့သို့ရာတွင်အခြားအမျိုးသမီးနှင့်အတူဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကြောင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အစီရင်ခံခဲ့ကြခြင်းအလိုငှါဖြစ်နိုင်သည်။ အနာဂတ်လေ့လာမှုများပိုပြီးလိင်ကွဲပြားမှုဆိုင်ရာဘာသာစကားအသုံးပြုနိုင်သည်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များ၏ကျားအထောက်အထားတွေကိုညွှန်ပြရန်ဖြေဆိုသူကိုမေးသင့်ပါတယ်။
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု (ကြိမ်နှုန်းအားဖြင့်သာပိုကောင်းတိုင်းတာဖြစ်နိုင်သည်ဥပမာ။ , ဘယ်လိုမကြာခဏပျမ်းမျှ) နှင့်ပြင်းထန်မှု (ဥပမာ။ , မည်မျှပျမ်းမျှတစ်ပတ်ကိုနာရီ) ဒါပေမယ့်လည်းအသုံးပြုမှုအများဆုံးလက်ရှိနှုန်းထားများအားဖြင့် (ဥပမာ။ , အတိတ်တစ်လဒါမှမဟုတ်အတိတ်နှစျတှငျ) ။ ထို့အပွငျကိုလောင်ညစ်ညမ်း၏အကြောင်းအရာအပေါ်သိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိစေခြင်းငှါ 3လုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်၏။43 ၏မော်ဒ 3လုပ်ငန်းစဉ်များ, ရုပ်တုဆင်းတုများ၏ပြင်းထန်မှုတို့ပါဝင်သည်ဖြစ်၏။ ဒါဟာခေတ်သစ်စီးပွားရေးအရညစ်ညမ်းတာရဲ့အနှစ်သာရကထိုကဲ့သို့သောအမျိုးသမီးများအကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအဖြစ်ကိုပိုမိုပြင်းထန်သောပုံရိပ်တွေမဟုတ်ဘဲကြိမ်နှုန်းထက်ရငျးနှီးမှုနှငျ့ပျြောရှငျ၏လျော့နည်းသွားခံစားချက်တွေကိုနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အများဆုံးကြည့်ရှုအားပေးညစ်ညမ်းအမျိုးအစားများနှင့်မိတ်ဖက်နှင့်လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်အတွင်းပြန်ပြောပြပုံရိပ်တွေအမျိုးအစားအကြောင်းကိုအမျိုးသမီးတွေတောင်းထားတဲ့သုတေသန, ဤဆက်ဆံရေး၏တစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလေ့လာစူးစမ်းဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့သင်တန်းသားများအဘို့အညစ်ညမ်းသတ်မှတ်ဘဲ, သူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဓိပ္ပာယ်အရှင်အလွန်အမင်း variable ကိုဖူးကြပေမည်။ အဓိပ္ပာယ်ပါဝင်သည်ကြောင့်အနာဂတ်လေ့လာမှုများအရေးကြီးသောပါလိမ့်မယ်။60 အနာဂတ်လေ့လာမှုများပိုကောင်းအကြောင်းအရာခွဲခြားကြောင်းကွဲပြားခြားနားသောမေးခွန်းများကိုသုံးပြီးညစ်ညမ်းအတွေးများကိုအကဲဖြတ်ရန်ချင်, ဒါမှမဟုတ်သာအချို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုသတင်းပို့သောမိန်းမတို့တွင်ဤအသင်းအဖွဲ့များဆန်းစစ်သို့သော်အနည်းငယ်မျှသာပါလိမ့်မယ်။
လူဦးရေနှင့်တိုင်းတာခြင်းန့်အသတ်, ပိုမိုသုတေသနပြုဘို့သဘောထားတွေနှင့်အပြုအမူခေါ်ဆိုခနှင့်ဆက်စပ်သောအခြားန့်အသတ်ထက်ကျော်လွန်။ ပထမဦးစွာကျွန်တော်တို့ရဲ့သုတေသနအမျိုးသမီးငယ်ညစ်ညမ်းစပ်လျဉ်းယူမတူကွဲပြားလမ်းကြောင်းများအတွက်တစ်ဦးချင်းစီတွန်းအားရှင်းပြကူညီစေခြင်းငှါ attitudinal အစီအမံများမပါဝင်ခဲ့ချေ။ အဘယ်အရာကိုမိန်းမတကာတို့ထက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုများ၏ကွဲပြားခြားနားသောဘယ်နေရာတွေမှာမှဟောပြောသောရှာမှီး, activation နှင့်လျှောက်လွှာများတစ်ဦးချင်းစီလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်ကွဲပြားခြားနားမှုခြေတစ်လှမ်း? ဘယ်လိုထိုကဲ့သို့သောအစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုသို့မဟုတ်စိတ်ဒဏ်ရာများ၏အတွေ့အကြုံကိုနှင့်ကျားမနှင့်လိင်အပေါ်အမြင်များအဖြစ်အချက်များမိမိတို့၏ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုဆက်စပ်သလဲ? တစျဖနျပိုသုတေသနလိုအပ်ပါသည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများသည်အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများတွင်ရှုပ်ထွေးပြီးသွယ်ဝိုက်သောကဏ္roleမှပါ ၀ င်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိရသည်။ ငယ်ရွယ်သောလိင်ကွဲလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ဆိုင်ရာလိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့်ကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုတို့နှင့်ဆက်စပ်နေသည်ကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်လိင်ကွဲလိင်မှုဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများသည်ဇာတ်ကောင်အားသူမနှင့်သက်ဆိုင်သောလိင်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိစေရန်အကြောင်းအရာကိုမှီခိုအားထားသင့်သည်။ အကျိုးဆက်အားဖြင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများနှင့်ပညာပေးများသည်ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းများရှိသော်လည်းလိင်ကွဲယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ် ဦး စလုံး၏ဘ ၀ များတွင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏အခန်းကဏ္equallyကိုညီတူညီမျှဂရုပြုသင့်သည်။ လိင်မှုကိစ္စဆိုင်ရာအမျိုးသမီးများအတွက်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုသူတို့မည်မျှကြည့်ရှုမည်၊ မည်မျှမည်မျှကြည့်မည်ကိုမေးမြန်းခြင်းသည်သူတို့၏ဘ ၀ များတွင်အပြာစာပေရုပ်ပုံ၏အခန်းကဏ္intoကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေနိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏လိင်၊
1. Cooper ကတစ်. လိင်နှင့်အင်တာနက်: သစ်ကိုထောင်စုနှစ်သို့ surfing. Cyberpsychol ပြုမူနေ 1998; 1: 187-193 ။ လင့်ခ်, Google Scholar
2. Herbenick: D, ဘိုးလင်း J ကို, ဖူကို T-CJ, Dodge B ကို, Guerra-Reyes L ကို, Sanders က S. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတူကွဲပြားမှု: အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးတွေမယ့်တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာအနေဖြင့်ရလဒ်များနှင့်ယောက်ျား. PLoS တစ်ခုမှာ 2017; 12: e0181198 ။ Crossref, Medline, Google Scholar
3. Wright PJ, bae က S, funk M က. ယူနိုက်တက်စတိတ်အမျိုးသမီးများနှင့်ညစ်ညမ်းလေးဆယ်စုနှစ်မှတစ်ဆင့်: Exposure, စိတ်နေသဘောထား, အပြုအမူ, တစ်ဦးချင်းခြားနားချက်. Arch လိင်ပြုမူနေ 2013; 42: 1131-1144 ။ Crossref, Medline, Google Scholar
4. တံတားများ AJ, Wosnitzer R ကို, Scharrer E ကို, နေရောင်ကို C, Liberman R ကို. ရောင်းအားအကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများအတွက်ကျူးကျော်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: တစ်ဦးကအကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ update ကို. အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ 2010; 16: 1065-1085 ။ Crossref, Medline, Google Scholar
5. ရို RC, Bachmann GA. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသုခချမ်းသာ, ပျော်ရွှင်မှုကို, နှင့်အမျိုးသမီးအတွက်စိတ်ကျေနပ်မှု: အသစ်တစ်ခုအယူအဆရေးရာပါရာဒိုင်းများအတွက်အမှု. J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther 2008;34:291–297; discussion 298–307. Crossref, Medline, Google Scholar
6. Barron M က, Kimmel M က. သုံးညစ်ညမ်းမီဒီယာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှု: တစ်လူမှုဗေဒဆိုင်ရာရှင်းပြချက်ခါနီး. J ကိုလိင် Res 2000; 37: 161-168 ။ Crossref, Google Scholar
7. Klaassen MJE, ပတေရုသ J ကို. အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအတွက်တန်းတူရေး (၌) ကျား, မ: လူကြိုက်များညစ်ညမ်းအင်တာနက်ဗီဒီယိုများတစ်ဦးကအကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ. J ကိုလိင် Res 2015; 52: 721-735 ။ Crossref, Medline, Google Scholar
8. ဘရောင်း JD, သည် L'Engle KL. X-Rated - အမေရိကန်အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောမီဒီယာနှင့်ထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်သောလိင်သဘောထားများနှင့်အပြုအမူများ. Community Res 2009; 36: 129-151 ။ Crossref, Google Scholar
9. Wright PJ, အာရိုယိုတစ်ဦးက. အင်တာနက်အပြာစာပေနှင့်အမေရိကန်အမျိုးသမီးများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ - အမျိုးသားနမူနာတစ်ခုမှရလဒ်များ. mass Community Soc 2013; 16: 617-638 ။ Crossref, Google Scholar
10 ။ Tomaszewska P ကို, Krahé B ကို. တစ်ဦးက longitudinal လေ့လာမှု: ပိုလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်သားကောင်နှင့်ကျူးလွန်၏ခန့်မှန်း. Arch လိင်ပြုမူနေ 2018; 47: 493-505 ။ Crossref, Medline, Google Scholar
11 ။ Sinković M က, Stulhofer တစ်ဦးက, Božić J ကို. အဆိုပါညစ်ညမ်းစောစောထိတွေ့မှု၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအာရုံရှာကြံ: ညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအကြားအသင်းအဖွဲ့ပြန်လည်ဆွေးနွေးရန်. J ကိုလိင် Res 2013; 50: 633-641 ။ Crossref, Medline, Google Scholar
12 ။ Hald GM က, Malamuth မိုင်, Yuen ကို C. ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုထောက်ပံ့သဘောထားတွေ: nonexperimental လေ့လာမှုများအတွက်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ဆွေးနွေးရန်. ကျူးကျော်ပြုမူနေ 2010; 36: 14-20 ။ Crossref, Medline, Google Scholar
13 ။ Malamuth မိုင်, Addison T က, Koss အမတ်. ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်: အဲဒီမှာယုံကြည်စိတ်ချရသောဆိုးကျိုးများရှိပါသလားနှင့်ငါတို့သည်သူတို့နားလည်နိုင်သလဲ Annu ဗြာလိင် Res 2000; 11: 26-91 ။ Medline, Google Scholar
14 ။ Wright PJ, Tokunaga သည် RS, Kraus တစ်ဦးက. ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အထွေထွေလူဦးရေလေ့လာမှုများအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်များ၏အမှန်တကယ်ပြုမူသောအမှု Meta-analysis သည်. J ကို Community 2016; 66: 183-205 ။ Crossref, Google Scholar
15 ။ Wright PJ, bae က S. ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်အမျိုးသမီးဆီသို့လိင်ကွဲပြားမှုဆိုင်ရာသဘောထားများ၏အမျိုးသားရေးအလားအလာလေ့လာမှု. လိင်သတ်ဖို့ 2015; 19: 444-463 ။ Crossref, Google Scholar
16 ။ Hald GM က, Malamuth မိုင်. ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု self-ရိပ်မိဆိုးကျိုးများ. Arch လိင်ပြုမူနေ 2008; 37: 614-625 ။ Crossref, Medline, Google Scholar
17 ။ McKee တစ်ဦးက. ညစ်ညမ်း၏ဗေဒ: စားသုံးသူများ၏အသိအမြင်. စဉ်ဆက် 2006; 20: 523-539 ။ Crossref, Google Scholar
18 ။ ဘရောင်း JD, သည် L'Engle KL, Pardun CJ, Guo, G, Kenneavy K သည်, ဂျက်ဆင်ကို C. Sexy media ကိစ္စ - ဂီတ၊ ရုပ်ရှင်၊ ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်မဂ္ဂဇင်းများတွင်လိင်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းထားသည်. ကလေးအထူးကု 2006; 117: 1018-1027 ။ Crossref, Medline, Google Scholar
19 ။ Ciclitira K သည်. ညစ်ညမ်း, အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသမီးတိုက်ပွဲ: အပျော်အပါးများနှင့်နိုင်ငံရေးအကြား. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ 2004; 7: 281-301 ။ Crossref, Google Scholar
20 ။ Johansson T က, Hammaré N ကို. Hegemonic ပုလ်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်လူငယ်များ၏သဘောထားနှင့်ဆက်ဆံမှု. J ကို Mens လုံး 2007; 15: 57-70 ။ Crossref, Google Scholar
21 ။ Weinberg က MS, Williams က CJ, Kleiner S က, Irizarry Y ကို. ညစ်ညမ်း, ပုံမှန်နှင့်လုပ်ပိုင်ခွင့်. Arch လိင်ပြုမူနေ 2010; 39: 1389-1401 ။ Crossref, Medline, Google Scholar
22 ။ Shaw က SM. အမျိုးသားများ၏အပန်းဖြေမှုနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ဘဝများ - အပြာစာပေရုပ်ပုံများအပေါ်အမျိုးသမီးများ၏သက်ရောက်မှု. Leis လုံး 1999; 18: 197-212 ။ Crossref, Google Scholar
23 ။ Eck BA ဘွဲ့. ယောက်ျားအများကြီးပိုခက်နေသောခေါင်းစဉ်: ဝတ်လစ်စလစ်ပုံရိပ်တွေ၏ကျားမကြည့်. ကျား Soc 2003; 17: 691-710 ။ Crossref, Google Scholar
24 ။ Lofgren-Mårtenson L ကို, Månssonလုပ် SA. တပ်မက်ခြင်း, ချစ်ခြင်း, အသက်ကိုရတတ်: ညစ်ညမ်းနှင့်အတူဆွီဒင်ဆယ်ကျော်သက် '' သညာနှင့်အတွေ့အကြုံများကို၏အရည်အသွေးလေ့လာမှု. J ကိုလိင် Res 2010; 47: 568-579 ။ Crossref, Medline, Google Scholar
25 ။ Stewart က DN, Szymanski DM. ငယ်ရွယ်သောအရွယ်ရောက်ပြီးသောအမျိုးသမီးများသည်သူတို့၏အမျိုးသားရင်ခုန်ဖွယ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာတမ်းများသည်သူတို့၏မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊ ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်ရောင့်ရဲမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။. လိင်အခန်းကဏ္ဍ 2012; 67: 257-271 ။ Crossref, Google Scholar
26 ။ ပတေရုသ J ကို, Valkenburg pm တွင်. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအင်တာနက်ပစ္စည်းထိတွေ့ခြင်းခန္ဓာကိုယ်မကျေနပ်မှုတိုးပွားစေသလား တစ်ဦးက longitudinal လေ့လာမှု. ကွန်ပျူတာက Hum ပြုမူနေ 2014; 36: 297-307 ။ Crossref, Google Scholar
27 ။ Bergner RM, တံတားများ AJ. ရင်ခုန်စရာမိတ်ဖက်များအတွက်မိုးသည်းထန်စွာညစ်ညမ်းပါဝင်ပတ်သက်မှု၏အရေးပါမှု: သုတေသနနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှု. J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther 2002; 28: 193-206 ။ Crossref, Medline, Google Scholar
28 ။ Zitzman ST, ဘတ္ MH. ဇနီး၏ခင်ပွန်းသည်များ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အတူတကွလှည့်စားခြင်းသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူလင်မယားဆက်ဆံရေးအတွက်တွယ်တာမှုခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်. လိင်စွဲ compulsive 2009; 16: 210-240 ။ Crossref, Google Scholar
29 ။ Szymanski DM, Feltman အဒေီ, Dunn TL. အမျိုးသားမိတ်ဖက်များ၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးများ၏ဆက်ဆံရေးနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး - ယုံကြည်မှု၊ သဘောထားနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတို့၏အခန်းကဏ္။. လိင်အခန်းကဏ္ဍ 2015; 73: 187-199 ။ Crossref, Google Scholar
30 ။ ကာရိုး JS, မတ်ဘတ်စ်ဘီကိုင်တွယ် DM, Willoughby BJ, ဘရောင်း CC ကို. ညစ်ညမ်းသောကွာဟချက် - ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတို့၏အပြာစာပေရုပ်ပုံများကွာခြားမှုများ. J ကိုလင်မယားဆက်ဆံရေး Ther 2017; 16: 146-163 ။ Crossref, Google Scholar
31 ။ Willoughby BJ, ကာရိုး JS, မတ်ဘတ်စ်ဘီကိုင်တွယ် DM, ဘရောင်း CC ကို. စုံတွဲများကြားတွင်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအတွက်ကွာခြားချက်များ: စိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူအသင်း, တည်ငြိမ်မှုများနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာလုပ်ငန်းစဉ်များ. Arch လိင်ပြုမူနေ 2016; 45: 145-158 ။ Crossref, Medline, Google Scholar
32 ။ Wright PJ, Tokunaga သည် RS, Kraus တစ်ဦးက, Klann E ကို. ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှု: Meta-analysis သည်: ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်စိတ်ကျေနပ်မှု. Hum Community Res 2017; 43: 315-343 ။ Crossref, Google Scholar
33 ။ Wright PJ. ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်များအတွက်အရေးဆိုမှုအကဲဖြတ်လူငယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူအပေါ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာဆိုးကျိုးများ. အမ်း Int Community Assoc 2011; 35: 343-385 ။ Crossref, Google Scholar
34 ။ Huesmann LR. ကြည့်ရှုသူများကမီဒီယာအကြမ်းဖက်မှုမှထိတွေ့မှုများနှင့်ရန်လိုသည့်အပြုအမူများအကြားစပ်လျဉ်းမြှင့်တင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်စဉ်များ. J ကို Soc ကိစ္စများ 1986; 42: 125-139 ။ Crossref, Google Scholar
35 ။ ကားရှိမုနျ W က, Gagnon JH. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များ: အပြီးအပိုင်နှင့်အပြောင်းအလဲ. Arch လိင်ပြုမူနေ 1986; 15: 97-120 ။ Crossref, Medline, Google Scholar
36 ။ Frith H ကို, Kitzinger ကို C. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script ကိုသီအိုရီ Reformulating: လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာညှိနှိုင်းတစ် discursive စိတ်ပညာ Developing. သီအိုရီ Psychol 2001; 11: 209-232 ။ Crossref, Google Scholar
37 ။ Rubin ကလေး, Windahl S က. အစုလိုက်အပြုံလိုက်ဆက်သွယ်ရေး၏အသုံးပြုမှုနှင့်မှီခိုမော်ဒယ်. Crit လုံး Mass Communications 1986; 3: 184-199 ။ Crossref, Google Scholar
38 ။ Bandura တစ်ဦးက. လူမှုသိမြင်မှုသီအိုရီ: တစ်ခုကအေးဂျင့်ရှုထောင့်. Annu ဗြာ Psychol 2001; 52: 1-26 ။ Crossref, Medline, Google Scholar
39 ။ Wright PJ, Tokunaga သည် RS. ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုကိုချိတ်ဆက်ရန်ဆယ်ကျော်သက်များ၏ကလေးမွေးဖွားမှုထိန်းချုပ်ရေးကိုရယူခြင်း - ပုဒ်မပေါင်းစုံနှင့် longitudinal အမျိုးသားစစ်တမ်းများမှရလဒ်များ။. int J ကိုလိင်ကျန်းမာရေး 2018; 30: 111-123 ။ Crossref, Google Scholar
40 ။ Wright PJ, Tokunaga သည် RS. ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Liberation နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချဘို့ထောက်ခံမှုနှစ်ခုအမျိုးသားရေး panel ကလေ့လာမှုများကနေ Aggregate ရလဒ်များကို. မီဒီယာ Psychol 2018; 21: 75-92 ။ Crossref, Google Scholar
41 ။ Wright PJ, Tokunaga သည် RS, bae က S. တစ်ဦး dalliance ထက်ပိုမို? လက်ထပ်အမေရိကန်လူကြီးများအကြားတွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနှင့် extramarital လိင်သဘောထားများ. Psychol Pop ဂီတမီဒီယာသတ်ဖို့ 2014; 3: 97-109 ။ Crossref, Google Scholar
42 ။ Braithwaite SR, Coulson, G, Keddington K သည်, Fincham FD. အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များအပေါ်ညစ်ညမ်း၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းအတွက်ထွန်းသစ်စလူကြီးများအကြားတွင်တက် hooking. Arch လိင်ပြုမူနေ 2015; 44: 111-123 ။ Crossref, Medline, Google Scholar
43 ။ တံတားများ AJ, Sun က CF, Ezzell ကို MB, ဂျွန်ဆင် J ကို. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script များနှင့်ညစ်ညမ်းကိုအသုံးပြုဖို့သူအယောက်ျားမိန်းမတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ. လိင်မီဒီယာ Soc 2016; 2: 237462381666827 ။ Google Scholar
44 ။ Wright PJ, နေရောင်ကို C, Steffen N ကို. ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်အဖြစ်ညစ်ညမ်း၏သဘောထားအမြင်များနှင့်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကို. J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther 2018;1–6 DOI: 10.1080/0092623X.2018.1462278 Crossref, Medline, Google Scholar
45 ။ Wright PJ. ယူအက်စ်အရွယ်ရောက်သူများ၏အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုကြာရှည်စွာဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း - လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်မပျော်ရွှင်မှု၏အလယ်အလတ်အဆင့်ကဏ္ analysis. ဂျေမီဒီယာ Psychol 2012; 24: 67-76 ။ Crossref, Google Scholar
46 ။ ပတေရုသ J ကို, Valkenburg pm တွင်. ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်မှုဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအင်တာနက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိုတင်ကာကွယ်မှုများနှင့်ထိတွေ့မှု - သုံးလှိုင်း panel လေ့လာမှု. မီဒီယာ Psychol 2008; 11: 207-234 ။ Crossref, Google Scholar
47 ။ Tsitsika တစ်ဦးက, Critselis E ကို, Kormas, G, Konstantoulaki E ကို, Constantopoulos တစ်ဦးက, Kafetzis: D. ဆယ်ကျော်သက်ညစ်ညမ်းအင်တာနက်စာမျက်နှာကိုအသုံးပြုခြင်း: ကိုအသုံးပြုခြင်း၏ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက်အချက်များနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုတစ် multivariate ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ. Cyberpsychol ပြုမူနေ 2009; 12: 545-550 ။ လင့်ခ်, Google Scholar
48 ။ Wingood GM က, DiClemente RJ, Harrington K သည်, ဒေးဗီးစ်က S, ချိတ် EW, အိုး MK. X- အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောရုပ်ရှင်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်များ၏လိင်နှင့်သန္ဓေတားနည်းနှင့်ဆက်နွယ်သောသဘောထားများနှင့်အပြုအမူများနှင့်ထိတွေ့ခြင်း. ကလေးအထူးကု 2001; 107: 1116-1119 ။ Crossref, Medline, Google Scholar
49 ။ Wright PJ, Randall AK. အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းထိတွေ့မှုများနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသားများအကြားအန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ. ကွန်ပျူတာကလူ့ပြုမူနေ 2012; 28: 1410-1416 ။ Crossref, Google Scholar
50 ။ နေရောင်ကို C, တံတားများတစ်ဦးက, ဂျွန်ဆင်ဂျေအေ, Ezzell ကို MB. ညစ်ညမ်းနှင့်အထီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဇာတ်ညွှန်း: An စားသုံးမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်း. Arch လိင်ပြုမူနေ 2016; 45: 983-994 ။ Crossref, Medline, Google Scholar
51 ။ မိန်းကလေးများရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပေါ်ယား Task Force ၏အစီရင်ခံစာ။ : မှာရရှိနိုင် www.apa.org. https://www.apa.org/pi/women/programs/girls/report ဝင်ရောက် ဖေဖေါ်ဝါရီလ 7, 2019. Google Scholar
52 ။ Ullman JB, Bentler pm တွင်. ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံညီမျှခြင်းမော်ဒယ်။ ခုနှစ်တွင်: Weiner ငါ, ed ။ စိတ်ပညာ၏လက်စွဲစာအုပ်, ဒုတိယထုတ်ဝေ။ Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. , 2012;661–690. DOI:10.1002/9781118133880.hop202023 Crossref, Google Scholar
53 ။ Browne မဂ္ဂါဝပ်, Cudeck R ကို. မော်ဒယ်မထိုက်မတန်အကဲဖြတ်၏အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများကို. Soc နည်းလမ်းများ Res 1992; 21: 230-258 ။ Crossref, Google Scholar
54 ။ Weston R ကို, ဂိုး PA ဆိုပြီး. ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာညီမျှခြင်းမော်ဒယ်မှတစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်လမ်းညွှန်. Couns Psychol 2006; 34: 719-751 ။ Crossref, Google Scholar
55 ။ Meana M က, Nunnink အရှေ့တောင်. လိင်စဉ်အတွင်းသိမြင်မှုအာရုံများ၏ content အတွက်ကျားမကွဲပြားမှု. J ကိုလိင် Res 2006; 43: 59-67 ။ Crossref, Medline, Google Scholar
56 ။ Burnham KP, Anderson က DR. မော်ဒယ်ရွေးချယ်ရေးနှင့် multimodel အခြ: တစ်ဦးကလက်တွေ့ကျတဲ့သတင်းအချက်အလက်-သီအိုရီချဉ်းကပ်, 2nd ed ။ နယူးယောက်: Springer-Verlag, 2002။ : မှာရရှိနိုင် www.springer.com/us/book/9780387953649 ဝင်ရောက် ဖေဖေါ်ဝါရီလ 7, 2019. Google Scholar
57 ။ Boies SC. တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ၏အွန်လိုင်းလိင်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေရေးကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်မှု - အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းလိင်ဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ချိတ်ဆက်မှု. J ကို Hum လိင်နိုင်သလား 2002; 11: 77-89 ။ Google Scholar
58 ။ ဆဗီးနားကို C, Wolak J ကို, Finkelhor: D. လူငယ်အဘို့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းထိတွေ့မှု၏သဘောသဘာဝနှင့်ဒိုင်းနမစ်. Cyberpsychol ပြုမူနေ 2008; 11: 691-693 ။ လင့်ခ်, Google Scholar
59 ။ ဂျွန်ဆင်ဂျေအေ. အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလူမှုကွန်ယက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: တစ်စပ်စု clicker ဖမ်းရန်, တွင် Boyle ကေ (ed ။ ): နေ့စဉ်ညစ်ညမ်း။ နယူးယောက်: Routledge, 2010: 147-163 ။ Google Scholar
60 ။ Willoughby BJ, မတ်ဘတ်စ်ဘီကိုင်တွယ် DM. အဆိုပါအကြှနျုပျသညျ၏မျက်စိတွင်ညစ်ညမ်း၏သဘောထားအမြင်အတွက်မူကွဲ Exploring. J ကိုလိင် Res 2016; 53: 678-688 ။ Crossref, Medline, Google Scholar